iWatermark + Android को लागी - वाटरमार्क फोटो र भिडियो # १ अनुप्रयोग | बेर आश्चर्यजनक
iWatermark + Android को लागी - वाटरमार्क फोटो र भिडियो # १ अनुप्रयोग
नवीनतम: 10 / 19 / 20
आवाश्यक हुन्छ: Android
iWatermark + Android को लागी - वाटरमार्क फोटो र भिडियो
यदि तपाईं एक शुरुआत वा पेशेवर फोटोग्राफर हुनुहुन्छ, फोटो जर्नलिस्ट वा कलाकार iWatermark + (iWatermark मा अपडेट) तपाईंको लागि देखिने व्यक्तिगत पाठ वा ग्राफिक वाटरमार्क थपेर काम गर्दछ। एक पटक तस्बिर वा भिडियोमा थपियो यो दृश्य वाटरमार्कले तपाईंको सिर्जना र स्वामित्व प्रदर्शन गर्दछ। यो तपाईको बौद्धिक सम्पत्तीमा हस्ताक्षर गर्ने जस्तो हो। iWatermark + मा अदृश्य वाटरमार्कहरू पनि छन् तपाईंको फोटो वा भिडियो सुरक्षा गर्नका लागि। अन्य पेशेवरहरूले के सोच्दछन् भनेर हेर्न गुगल प्ले स्टोरमा (360 star० भन्दा बढी) star स्टार समीक्षा।
२०१ of को शीर्ष १०० अनुप्रयोगहरूको संख्या। - BestAppSite.com
"हामीले सिफारिस गर्ने एउटा अनुप्रयोग र हाम्रो स्तम्भकार केविन कुस्टरले सिफारिस गरे iWatermark हो"। जोआन केटर, theappWisper.com
"यदि तपाइँ तपाइँको तस्बिर र भिडियोहरू साहित्यिक चोरीबाट छिट्टै जोगाउन चाहानुहुन्छ, तब iWatermark तपाइँको लागि एक अनिवार्य उपकरण हुनेछ!" freeappsforme 3/12/22 द्वारा समीक्षा गर्नुहोस्
स्थानीयकरणहरू: ✔ अंग्रेजी ✔ फ्रेन्च, ✔ जर्मन, ✔ जापानी, ✔ चिनियाँ, ✔ भियतनामी, ✔ हिन्दी, ✔ स्पेनिश ✔ उर्दू ✔ इन्डोनेसियाली
मद्दत / मैन्युअल
iWatermark + Android को लागी - # १ वाटरमार्क फोटो र भिडियो गर्न अनुप्रयोग
सूक्ष्म वाटरमार्कहरू जुन तपाईंको फोटोहरूलाई सुरक्षा दिन्छ
कुनै पनि अन्य अनुप्रयोग भन्दा बढी वाटरमार्क प्रकारहरू
विगत २ दशकहरुका लागि iWatermark को लागी सबैभन्दा लोकप्रिय बहु प्लेटफार्म उपकरण उपलब्ध छ म्याक र विन्डोज आईवटरमार्क प्रो को रूपमा र आईओएस / फोन / आईप्याड र एन्ड्रोइड अनुप्रयोग iWatermark र iWatermark को रूपमा। iWatermark ले तपाईंलाई कुनै पनि फोटो वा भिडियोमा तपाईंको व्यक्तिगत वा व्यवसायिक वाटरमार्कहरू थप्न अनुमति दिन्छ। एकचोटि यो वाटरमार्क थपियो तपाईंको फोटो र कलाकृतिको तपाईंको सिर्जना र स्वामित्व प्रदर्शन गर्दछ।
इवाटरमार्क भनेको के हो? iWatermark एक सफ्टवेयर हो जसले एक नयाँ प्रकारको वाटरमार्किंगलाई अनुमति दिन्छ। यसले दृश्य र अदृश्य डिजिटल वाटरमार्कको प्रयोग गर्दछ यसको फोटोसँग यसको निर्मातासँग जोड्नको लागि।
को लागि iWatermark को हो? प्रत्येक व्यक्ति जसले फोटो र भिडियो लिन्छन्। हामीलाई भनिएको छ कि यो फोटो जर्नलिस्टहरू, प्रो फोटोग्राफरहरू र इन्स्टाग्राम, फेसबुक र अन्य सामाजिक मिडिया साइटहरू प्रयोग गर्नेहरूका लागि आवश्यक छ।
किन यो आवश्यक छ? किनकि यसले फोटोग्राफरहरूलाई उनीहरूको तस्विरहरूलाई अधिकतम प्रमोट गर्न अनुमति दिन्छ जबकि तस्विर लेखकको रूपमा नियन्त्रण र जडान गुमाउँदा रोक्दछ। अब जब तस्बिर साझेदारी गरिएको छ लेखक / फोटोग्राफर जान्न र क्रेडिट गर्न जारी राख्न सकिन्छ।
तलको भिडियोमा टेरी ह्वाइट सुन्नुहोस्, एडोब प्रणालीहरूको लागि विश्वव्यापी डिजाइन र फोटोग्राफी ईभान्जलिस्ट, उनले लाइटरूमसँग कसरी iWatermark + प्रयोग गर्दछ भन्ने कुरा गर्नुहोस्।
iWatermark धेरै तरिकाहरूमा अनुपम छ:
All सबै plat प्लेटफर्महरू आईओएस, म्याक, विन्डोज र एन्ड्रोइडमा उपलब्ध छन्।
✓ यो दुबै नियमित अनुप्रयोग र फोटो सम्पादन एक्स्टेन्सन हो जुन एप्पलको फोटो र अन्य अनुप्रयोगहरूमा सिधा वाटरमार्क गर्न सक्दछ।
One एक वा प्रयोग गर्नुहोस् बहु पानी चिन्ह एक साथ फोटो वा फोटोहरूमा।
✓ वाटरमार्क भिडियो कुनै पनि visible देखिने र १ अदृश्य = total कुल वाटरमार्क प्रकारहरूसँग।
✓ वाटरमार्क फोटो कुनै पनि visible देखिने र १ अदृश्य = total कुल वाटरमार्क प्रकारहरूसँग।
✓ वाटरमार्क १ वा धेरै समूहमा ब्याच।
Effects टिन्ट, छाया, फन्ट, आकार, अस्पष्टता, रोटेशन, आदि जस्तै प्रभावहरूको प्रत्यक्ष अन्तर्क्रियात्मक समायोजन।
Processing प्रशोधन गर्नु अघि फोटोमा वाटरमार्क (हरू) को प्रत्यक्ष पूर्वावलोकन।
Water २242२ अनुकूलन र Apple० एप्पल फन्ट = २ 50 २ महान फन्टहरू भित्र निर्मित छन् र पाठ वाटरमार्कको लागि प्रयोगको लागि तयार छन्।
5000 professional००० भन्दा बढि व्यावसायिक भेक्टर ग्राफिक्स विशेष गरी फोटोग्राफरहरूको लागि।
All सबै सिर्जना गरिएको वाटरमार्कहरू अन / अफ, पुन: प्रयोग, निर्यात र साझेदारी गर्न बचत गर्नुहोस्।
Water ११ प्रकारका वाटरमार्कहरू। Water वाटरमार्कहरू अद्वितीय र आई-वाटरमार्कका लागि विशेष छन् (तल हेर्नुहोस्)।
हामी तपाईको फोटोलाई कस्टमाइज गर्नका लागि गर्नुहुने सबै कुरा विचार गर्दछौं, यसलाई आफ्नै बनाउने, वाटरमार्कको लागि। विगतमा वाटरमार्कहरू आविष्कार गरिएको थियो र आईडी आईटमहरू जस्तै टिकटहरू, मुद्रा, बैंक नोटहरू, राहदानीहरू र अन्य आधिकारिक कागजातहरूमा प्रयोग गरियो। आजकल, उस्तै बाटोमा, डिजिटल वाटरमार्कहरूले तपाईंको फोटो र भिडियोहरूमा तपाईंको पहिचान र शैली समेट्छ। फोटोग्राफर एसेल एडम्स एक विशिष्ट शैली थियो जुन आफ्नो फोटोहरूलाई चिनो लगाउँदछ, जस्तो कि अद्वितीय चित्रकला शैली मोनेटउसको चित्रहरु चिन्ह लगाउँदछ। एन्सेल एडम्स कालो र सेतो, स्पष्टता, कन्ट्रास्ट, विशाल, अव्यवस्थित, र राजसी परिदृश्यहरू आफ्नो हस्ताक्षरको रूपमा प्रयोग गरे पनि उनले आफ्नो काममा हस्ताक्षर गरे पनि। ठूला फोटोग्राफरहरू र कलाकारहरू जस्तो तपाईं आफ्नो कार्य शैली गर्न सक्नुहुनेछ ताकि यो केवल सुन्दर र चिन्न सकिने मात्र होइन तर तपाईंको सिर्जनाहरूको रक्षा गर्न मद्दत गर्दछ। यसैले हामी प्रत्येक आइटमहरू मेटाडाटा, स्टेगोमार्क, रिसाइज र वाटरमार्कको रूपमा फिल्टरहरू देख्छौं किनकि उनीहरूले तपाईंको विशेष शैलीको साथ फोटो इम्बुइ गर्न सक्दछन्।
आईवटरमार्क + ११ वाटरमार्कको अनौंठो प्रकार
क्यामेराबाट फोटो अज्ञात छन्। जब तपाईं फोटो लिनुहुन्छ र साझेदारी गर्नुहुन्छ, तपाईंको साथीहरूले यसलाई साझा गर्छन्, तब उनीहरूका साथीहरू, तब कुल अपरिचितहरू। प्रत्येक पटक यो कम र कम छ र अन्ततः तपाईं संग कुनै सम्बन्ध छ। विश्वको बाँकी भागमा तपाईंको फोटो 'निर्माता अज्ञात' हो। धेरै उत्कृष्ट तस्विर भाइरल भइसकेका छन् (बेतहाता लोकप्रिय बनेका छन्) जसमा मालिकको पहिचानको कुनै संकेत भेटिएन। यसको मतलब हो, अरूलाई कुनै पनि तरीका बिना स्वीकृति, धन्यवाद वा भुक्तानी मालिकलाई। यस समस्याको समाधान आईवाटार्मार्क हो, जसको उद्देश्य तपाईंको फोटोसँग तपाईंको पहिचानका साथ विभिन्न प्रकारका दृश्य र अदृश्य रूपमा निहित गर्नु हो। आईवाटार्मार्कमा प्रविधिहरू र ११ वटरमार्क उपकरणहरूले तपाईंलाई फोटोहरू हस्ताक्षर गर्न, निजीकृत गर्न, शैलीकरण गर्न, सुरक्षित गर्न र सुरक्षित गर्न मद्दत गर्दछ।
सतहमा iWatermark फोटोशप जस्तै ग्राफिक अनुप्रयोग जस्तै केहि समान लाग्न सक्छ तर iWatermark ले एक फरक भिन्न कोण लिन्छ। आई वाटरमार्क एक वा धेरै फोटोहरू प्रक्रिया गर्न डिजाइन गरिएको छ वाटरमार्किंग उपकरणको बिभिन्नतासँग, सबै अद्वितीय उद्देश्यको लागि निर्माण गरिएको हो, तपाईंको प्रत्येक फोटोग्राफरलाई फोटोग्राफरको रूपमा पहिचानसहित राख्न।
- डिजिटली तपाईंको फोटो / कलाकृति iWatermark को साथ दावी गर्न, सुरक्षित गर्न र तपाईंको बौद्धिक सम्पत्ती र प्रतिष्ठा कायम गर्न हस्ताक्षर गर्नुहोस्।
- तपाईंको सबै छविहरूमा तपाईंको कम्पनी लोगो राखेर, तपाईंको कम्पनीको ब्रान्ड निर्माण गर्नुहोस्।
- वेबमा वा विज्ञापनमा कतै तपाईंको फोटो र / वा कलाकृति देखेर छक्क पर्नुहोस्।
- चोरी र सिरिच गर्नेहरूसँग टाउको दुख्नेबाट बच्नुहोस् जसले दावी गर्छन् कि उनीहरूले यो जान्दैनथे कि तपाईंले यो बनाउनु भयो।
- महँगो मुद्दा चलाउनबाट जोगिनुहोस् जुन आईपको दुरुपयोगको यी मामिलाहरूमा संलग्न हुन सक्दछ।
- बौद्धिक सम्पत्ती स्क्वाबललाई वेवास्ता गर्नुहोस्।
आईवटरमार्क र ११ वा वाटरमार्क प्रकारहरू मध्ये एक वा बढी प्रयोग गरेर फोटोहरू सुरक्षित गर्न र फोटोग्राफरहरूलाई उनीहरूले योग्य क्रेडिट प्राप्त गर्न सक्दछन्।
iWatermark + # १ अनुप्रयोग टिकटोकको लागि
iWatermark + #1 SnapChat को लागी अनुप्रयोग
iWatermark + #1 इंस्टाग्रामका लागि अनुप्रयोग
तल बायाँ तल सेन्ट्रल पार्क NYC को ल्याण्डस्केप फोटोमा एक एम्बोस वाटरमार्क छ, गिरावटमा। IWatermark + को क्यानभास पृष्ठमा प्रदर्शित
[स्थिर]। भाषा अनुवाद अपडेट।
[जोडिएको] एन्ड्रोइड ओएस ११ समर्थन।
[जोडिएको]: हस्ताक्षर वाटरमार्क थपियो र छान्नुहोस् र हस्ताक्षर सुविधाहरू चित्र।
[जोडिएको]: नयाँ र color्ग प्यालेट HSL, RGB रंग विकल्प प्रकार, सम्पादन र color, मनपर्ने र,, प्रमुख र selected चयनित छविबाट झिकिएको साथ थपियो।
[जोडिएको]: पाठ ब्यानर पृष्ठभूमि अस्पष्टता।
[जोडिएको]: भियतनामी भाषा अनुवाद।
[अपडेट गरिएको]: मद्दत सेक्सन UI अपडेट गरियो र नयाँ लिंक टेक थपियो। समर्थन
[अपडेट गरिएको]: सुधारिएको अनुप्रयोग प्रदर्शन।
[अपडेट गरिएको]: अनुप्रयोग संस्करण जानकारी। [अपडेट गरिएको]
[फिक्स्ड]: ग्यालरीमा एल्बम हराइरहेको [फिक्स्ड]
[अपडेट गरिएको]: मिडिया ग्यालरी डिजाइन। [अपडेट गरिएको]
[जोडिएको] पाठ वाटरमार्कमा एम्बोस प्रभाव थपियो [जोडी]
[जोडिएको] प्राथमिकतामा एसडी कार्ड विकल्पमा बचत थपियो। सतर्क यदि चयनित मिडिया भण्डारण खाली ठाउँ १GB भन्दा कम छ [जोडीएको]
[फिक्स्ड] नि: शुल्क वाटरमार्क भिडियोको बायाँ तल्लोमा देखाईनेछ [फिक्स्ड]
[अपडेट गरिएको] आयात फोटो / भिडियो लेबल अपडेट र निर्यात संदेश [अपडेट गरिएको]
[थपिएको] वाटरमार्क सूचीमा वाटरमार्क तान्नुहोस् तपाईंको इच्छा अनुसार व्यवस्थित गर्न [जोडियो]
[स्थिर] क्यानभास / पूर्वावलोकन मा वाटरमार्क स्थिति वाटरमार्क फोटो भन्दा फरक थियो [स्थिर]
[new] अब तपाईंको आफ्नै कस्टम फन्टहरू थप्नुहोस्!
[नयाँ] HEIC र HEIF अब एन्ड्रोइड + + मा समर्थित छ जहाँ तिनीहरू ग्यालरीमा देख्न सकिन्छ र iटरमार्कमा वाटरमार्क गर्न सकिन्छ।
[मोड] भिडियोहरूको लागि सबैभन्दा नयाँ एन्कोडि c कोडेक्स थपियो
[मोड] एल्बममा हराइरहेको छविहरूको लागि समर्थन थपियो।
[मोड] एल्बममा हराइरहेको भिडियोहरूको लागि समर्थन थपियो।
[नयाँ] सबै फन्ट अनुहार फाईलहरू एक परिवारसँग सम्बन्धित छ अब फन्ट परिवारमा मर्ज गरियो
[नयाँ] बोल्ड र ईटालिक सुविधाहरू डिफल्ट र अनुकूलन फन्ट परिवारहरूको लागि थपियो।
[जोडिएको]: छवि र भिडियो मिति र नाम सुविधा द्वारा क्रमबद्ध गर्नुहोस्। थपियो
[फिक्स्ड]: भिडियो ईन्कोडि c कोडेक मुद्दा। स्थिर
[फिक्स्ड]: छवि समय लोड समस्या। स्थिर
[फिक्स्ड]: आइकन क्लिकमा संकुचित हुन्छ। स्थिर
[स्थिर]: ext र QR कोड वाटरमार्क पोइन्टहरू। स्थिर
[थपिएको]: 1080p वा kk भिडियो समर्थन। थपियो
[जोडिएको]: बेस architect 64 वास्तुकला समर्थन। थपियो
[अपडेट गरिएको]: प्रत्येक वाटरमार्क प्रकारको शीर्षक। अद्यावधिक गरियो।
[जोडिएको]: एन्ड्रोइड १० समर्थन। थपियो
[स्थिर]: एन्ड्रोइड १० छवि गैलरी पहुँच। स्थिर
- [स्थिर]: फोटो प्रसंस्करण मुद्दाहरूको ब्याच। अब फिक्स गरियो।
- [स्थिर]: भाषा परिवर्तन मुद्दा। अब फिक्स गरियो।
- [स्थिर]: एम्बोस प्रभाव मुद्दा। अब यो सुविधा हटाइयो।
- [स्थिर]: ई Eng्गे्रेभ प्रभाव मुद्दा। अब फिक्स गरियो।
- [नयाँ]: Android .9.0 .० समर्थन गर्न अपडेट भयो
- [फिक्स्ड]: प्रयोगकर्ताले रिपोर्ट गरेको अनुप्रयोग स्यामसंग नोट on मा क्र्यास भयो
- [नयाँ]: फन्ट संवाद
- [नयाँ]: सुधारिएको ग्राफिक्स र आइकन रिजोलुसन
- [नयाँ]: ट्याग सूचीमा "फोटो सिर्जना मिति" सेक्सन थपियो। फोटो सिर्जनाको लागि, वर्ष, छोटो र लामो महिना, छोटो र महिनाको लामो दिन सामेल छ। २ hours घण्टा मिति ढाँचा समय थपियो। प्रयोगकर्ता पिटरलाई धन्यवाद
- [स्थिर]: टिन्ट- एक हस्ताक्षर जस्तो बिटम्याप वाटरमार्क टिन्टि forको लागि
- [नयाँ]: विविध सुधार र फिक्सहरू
- [नयाँ] अनुप्रयोग स्थानीयकरण - बिभिन्न देश भाषाहरु लाई समर्थन गर्दै:
- उर्दू (पाकिस्तान), हिन्दी (भारत), इन्डोनेसियाली (इन्डोनेशिया), पारम्परिक चिनियाँ (ताइवान, ह Hongक Kong, र मकाउ), जापानी (जापान), डच (जर्मन), स्पेनिश (स्पेन) र फ्रान्सेली (फ्रान्स)
- [स्थिर] पाठ वाटरमार्क मुद्दाहरू फिक्स गरियो
- [स्थिर] पाठ ब्यानर वाटरमार्क मुद्दाहरू फिक्स गरियो
- [नयाँ] पाठ ब्यानर वाटरमार्क
* अ English्ग्रेजी अनुप्रयोगको लागि पूर्वनिर्धारित भाषा हो। सरलीकृत चीनियाँ (चीन) अर्को आउँदैछ।
सबै प्रतिक्रिया को लागी धन्यवाद। कृपया यसलाई आउँदै राख्नुहोस्।
- [फिक्स्ड] '' आईवटरमार्कको साथ सिर्जना गरिएको 'जुन नि: शुल्क संस्करणमा फोटोहरूमा प्रदर्शन गर्नका लागि मात्र दुर्घटनामा भुक्तान गरिएको संस्करणमा देखा पर्‍यो। फिक्स्ड। तान्यालाई धन्यवाद छ जसले लेखे र धेरै राम्ररी हामीलाई हाम्रो गल्तीको बारेमा थाहा दिनुहोस् (हाम्रो शब्द उहाँको छैन)। हप्ताको अन्तमा ईमेल गरेकाहरूलाई धेरै धन्यवाद। सबैसँग माफी माग्दै हामी चकित भएका थियौं। किनकि iWatermark + र iWatermark + नि: शुल्क दुबै समान कोडबेस प्रयोग गर्दछ, एक मिनेट परिवर्तन गर्दा गोलमाल भयो। अब फिक्स्ड!
- उर्दू (पाकिस्तान), हिन्दी (भारत), इन्डोनेशियाई (इन्डोनेशिया), चिनियाँ (चीन), जापानी (जापान), डच (जर्मन), स्पेनिश (स्पेन) र फ्रान्सेली (फ्रान्स)
- [संशोधित] पाठ वाटरमार्क संशोधनहरू
* अ English्ग्रेजी अनुप्रयोगको लागि पूर्वनिर्धारित भाषा हो।
- [नयाँ] प्रयोगकर्ताहरूले व्हाट्सएपमा वाटरमार्क गरिएका छविहरू / फोटोहरू साझेदारी गर्न सक्दछन्।
- [नयाँ] फोटो अनुक्रम, अघिल्लो फोटो (हरू) मा स्विच गर्नुहोस्
- [संशोधित] फोटो अनुक्रम मुद्दाहरू समाधान गरियो, UI संशोधनहरू
- [संशोधित] आर्कटेक्स्ट वाटरमार्क सुधारहरू।
- [स्थिर] ग्राफिक्स, पाठ र आर्कटेक्स्ट वाटरमार्कको स्थिति मुद्दाहरू
- [स्थिर] आर्कटेक्स्ट वाटरमार्क मुद्दाहरू फिक्स गरियो।
- [स्थिर] मद्दत / ग्राहक समर्थन कनेक्टि Iss मुद्दा फिक्स गरियो।
- [फिक्स्ड] प्रयोगकर्ताहरूले आफ्नो फेसबुक स्थिति / समयरेखामा वाटरमार्क गरिएका छविहरू / फोटोहरू साझेदारी गर्न सक्दछन्।
- [स्थिर] वाटरमार्क सम्पादन स्थिर
- [फिक्स्ड] आर्कटेक्स्ट वाटरमार्क साइज, सीमाहरू - [फिक्स्ड] क्यूआर कोड वाटरमार्क यूआई र रोटेशन परिमार्जित
- [स्थिर] भिडियो मुद्दामा वाटरमार्क रोटेशन
- [संशोधित] केही UI संशोधनहरू
- [परिमार्जित] वाटरमार्कलाई ट्याप गरेर साथ साथै स्क्रिनमा कहिँबाट पनि घुमाउनुहोस्।
सुझाव र बगको साथ ईमेल गर्ने प्रयोगकर्ताहरूलाई ठूलो धन्यवाद। तपाईका योगदानहरूलाई मद्दत गरियो!
- [नयाँ] वाटरमार्क ड्र्याग, जुम र रोटेशन सुधार गरियो
- [स्थिर] छवि अनुक्रम मुद्दा फिक्स गरियो
- [फिक्स्ड] तस्विर हराउने मुद्दा फिक्स
- [स्थिर] वाटरमार्क (हरू) अपलोड मुद्दा फिक्स गरियो
- [फिक्स्ड] निर्यात मुद्दामा वाटरमार्क रोटेशन स्थिर
- [फिक्स्ड] पाठ वाटरमार्क (हरू) मापन अप मुद्दामा गायब
- [संशोधित] UI सुधारियो
- [संशोधित] मद्दत सेक्सन सुधार गरियो
- [नयाँ] वाटरमार्क ड्र्याग, जुम र आईओएस जस्तो घुमाउनुहोस्
- [नयाँ] पुन: नामकरण वाटरमार्क थप्नुहोस्
- [नयाँ] पृष्ठ र लिंकहरूको बारेमा संस्करण संख्या थप्नुहोस्
- [स्थिर] तस्बिर चयनित (आयात गरिएको) ग्यालरीबाट / क्यामेराबाट लिइएको बेला बेलामा गायब भयो
- [संशोधित] बटन सुधार गरियो
- [संशोधित] सम्वादको बारेमा सुधार गरियो
- एम्बोस, टेक्स्ट वाटरमार्क र आर्कटेक्स्ट वाटरमार्क प्रकारहरूको लागि ईन्ग्रेभ प्रभावहरू।
- ताला लगाउनुहोस्, डुप्लिकेट बनाउनुहोस्, र कुनै वाटरमार्क (हरू) लाई ठीक वाटरमार्क म्यानेजरमा मेटाउनुहोस्।
यी कसरी कार्य गर्दछन् विस्तृतका लागि म्यानुअल हेर्नुहोस्।
- अद्यावधिक त्रुटि सन्देश
- फोल्डरहरूमा बचत गर्ने वाटरमार्क गरिएका तस्बिरहरू / भिडियोहरूमा सुधार गरिएको छ।
- ट्विटर, फेसबुक, इन्स्टाग्रामका लागि मान्यता जाँचको सुधार
- यूआई र मिस आइटममा धेरै अन्य सुधारहरू।
- गुगल ड्राईव एकीकरण, अब उपयोगकर्ताले गुगल ड्राइवबाट आईवटरमार्क + मा सिधा वाटरमार्क फोटोहरूमा फोटो आयात गर्न सक्दछ।
- पाठ वाटरमार्क र आर्कटेक्स्ट वाटरमार्क प्रकारहरूका लागि, अघिल्लो चयनित फन्ट देखाइनेछ जब प्रयोगकर्ताले अर्को पटक फन्ट संवाद खोल्नेछ।
- ड्रपबक्सबाट एकल वा बहु तस्वीरहरू आयात गर्नुहोस्। फोल्डर हाइरार्कीमा फिर्ता जान हार्डवेयर / ओएस पछाडि कुञ्जी प्रयोग गर्नुहोस्।
- कम मेमोरी स्थितिहरूमा अझ ठूलो स्थिरता।
- मल्टिपल वाटरमार्कहरू अब कुनै पनि भिडियोमा लागू गर्न सकिन्छ जस्तो कि तपाईंले फोटोहरूमा पहिले नै गर्न सक्नुहुनेछ।
महान प्रतिक्रिया, बग रिपोर्टहरू र सुझावहरूको लागि सबै प्रयोगकर्ताहरूलाई धन्यवाद। तपाईंको प्रतिक्रिया (हामीलाई प्रत्यक्ष) र समीक्षा (Google Play मा) ती हुन् जुन अनुप्रयोगलाई अगाडि बढाउन मद्दत गर्दछ। तपाईंको विचार र समर्थनले हामीलाई दिशा दिन मद्दत गर्दछ। अझ आउन ...
- छवि म्याग्निफायर छविमा लामो ट्यापमा देखा पर्दछ जुन औंला मुनि म्याग्निफाइड क्षेत्र देखाउँदछ
- वाटरमार्क अब चेकमार्क आइकनमा ट्याप गर्नुको सट्टा वाटरमार्क सूचीमा आईटममा कहिँ पनि ट्याप गर्न जाँच गरियो
- क्र्यास फिक्स गरियो
- फोटोशप एक्सप्रेस अनुप्रयोगबाट फोटो यस अनुप्रयोगमा सेयर गर्न सकिन्छ
भिडियो वाटरमार्किंग सुविधा थपियो। हो! अब, iWatermark + वाटरमार्क चित्रहरू र भिडियो फाइलहरू।
१- ल्यान्डस्केप मोड अब समर्थित छ। पोर्ट्रेट र ल्यान्डस्केप अभिमुखिकरण बीच कहिँ पनि अनुप्रयोगमा स्विच गर्नुहोस्।
२- विविध प्रयोगकर्ता ईन्टरफेसमा सुधार, केही फोनहरूको लागि फिक्सहरू
-- मिति को लागी सम्मिलित ट्याग सबै वाटरमार्क निर्माण गतिविधिहरुका लागि उपकरणमा प्रयोगकर्ताले सेट गरेको लोकेलको अनुसार ढाँचा गरिएको छ ट्याब विकल्प सम्मिलित गर्नुहोस्।
राम्रो प्रतिक्रियाको लागि प्रयोगकर्ताहरूलाई धन्यवाद! कृपया यसलाई आउँदै राख्नुहोस्। कृपया तपाईंको साथीलाई अनुप्रयोगको बारेमा बताउनुहोस्। अधिक व्यक्तिहरूले iWatermark + विकसित गर्न मद्दत गर्दछ
अर्को आश्चर्यचकित आउँदैछ :)
१- ल्यान्डस्केप मोड समर्थित छ र अब प्रयोगकर्ताले पोर्ट्रेट र ल्यान्डस्केप मोड बीच अनुप्रयोगमा कुनै पनि स्क्रिनमा स्विच गर्न सक्दछ।
२- मितिको लागि सम्मिलित ट्याग सबै वाटरमार्क निर्माण गतिविधिहरूका लागि उपकरणमा प्रयोगकर्ताद्वारा सेट गरिएको लोकेल अनुसार ढाँचा गरिएको छ ट्याब विकल्प सम्मिलित गर्नुहोस्।
- अनुप्रयोग स्थिरतामा सुधार।
- प्रमुख नयाँ सुविधा। सम्मिलित ट्याग कार्यक्षमता टेक्स्ट वाटरमार्क, आर्कटेक्स वाटरमार्क, क्यूआरकोड वाटरमार्क, मेटाडाटा वाटरमार्क र स्टेगोमार्क वाटरमार्क प्रकारहरूको लागि प्रदान गरिएको छ। यसको मतलब माथिको वाटरमार्क प्रकारहरूका पाठमा तपाईले 'ट्याग' राख्न सक्नुहुन्छ जुन क्यामेराले फोटोमा राखिएको जानकारीलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ जस्तै शटर गति, क्यामेरा नाम, जीपीएस, अपर्चर, समय, र अन्य दर्जनौं। यो ट्याग त्यो जानकारीको लागि भेरियबलको जस्तो छ जुन त्यसपछि वाटरमार्क गरिएको फोटोमा देखिन्छ। काेशिस गर!
- सुधार कला कला।
- बचत गरिएको पानी चिन्हित फोटोको पूर्ण मार्ग देखाइएको छ
- विभिन्न प्रकारका वाटरमार्कको कोण स्लाइडरको अतिरिक्त टेक्स्टबक्समा कोण मान प्रदान गरेर समायोजित गर्न सकिन्छ।
- सबै देखिने वाटरमार्क प्रकारहरूमा सबै स्लाइडरहरूमा, वाटरमार्क पूर्वावलोकन केवल ट्यापिंग स्लाइडरमा देखाइन्छ।
- बग हटाईन्छ जहाँ एकल वर्ण पाठ वाटरमार्क ठाडो रूपमा ट्रिम गर्दै थियो।
- सफ्ट किबोर्ड भनेको पाठ र आर्क टेक्स्ट वाटरमार्कमा ट्याप गर्ने कार्यमा स्वतः लुक्नुहोस्
- केहि बगहरू हटाइए
- अनुप्रयोग स्थिरता सुधार गरिएको छ
- ठूला छविहरू वॉटरमार्किंगका लागि सुधारिएको समर्थन।
- वाटरमार्क लिस्टिंग आइकनमा ट्याप गर्नाले लोडिंग स्क्रिन देखाउँदै तुरुन्तै वाटरमार्क सूचीबद्ध स्क्रिन खुल्छ।
- मुख्य स्क्रिनमा वाटरमार्कमा डबल ट्यापिंगमा वाटरमार्क सम्पादन गर्न स्क्रिन खोल्नुभन्दा पहिले लिस्टिंग वाटरमार्क स्क्रिन खोल्ने प्रतिबन्ध हटाउँदछ।
र्याभहरू, समीक्षा र प्रेस विज्ञप्तिहरू iWatermark + का लागि Android का लागि
"आईवटरमार्क + आईओएस मा मिति देखेको छु सबै भन्दा राम्रो वाटरमार्किंग अनुप्रयोग हो। राम्रोसँग आईओएस फोटो सम्पादन विस्तारको रूपमा एकीकृत। ” र "बर्षको शीर्ष १०० अनुप्रयोगहरूको संख्या 5।" - टेरी सेतो, प्रिंसिपल वर्ल्डवाइड डिजाईन र फोटोग्राफी ईन्जेलिस्ट एडोब प्रणाली ईंक का लागि।
“IWatermark + सबैभन्दा शक्तिशाली वाटरमार्क अनुप्रयोग उपलब्ध छ। यसले प्रयोगकर्ताहरूलाई आफ्नो तस्बिरमा types प्रकारसम्म वाटरमार्क थप्न, अनुकूलन गर्न, त्यसपछि सामाजिक मिडिया प्लेटफर्महरूमा साझा गर्न अनुमति दिन्छ। " भियतनामी साइट Taimienphi.vn iWatermark + १०/१//२० को समीक्षा
टबिता क्यारो द्वारा ट्यूटोरियल
IWatermark + को अरबी समीक्षा
Sec० सेकेन्ड ईन्ड्रोइड को लागी iWatermark + मा परिचय
एन्ड्रोइड प्ले स्टोर रेव्स
यो सरल र शान्त प्रेम गर्नुहोस्
अल्फा मोडस्क्वाड जनवरी,, २०१6२:१:2019 बिहान
यो अनुप्रयोग मनपर्दछ
Andre Rüberg जनवरी १, २०१ 1 2019::8 बिहान
पहिले मैले नि: शुल्क संस्करणको परीक्षण गरें ... र खुशी थिए। त्यसैले मैले फोटो-संस्करण खरीद गरेँ (सस्तो) ... र निराश भए ... मैले मेरो पैसा फिर्ता लिएँ र यो संस्करण खरीद गरें ... भिडियोहरूको लागि। यो अन्तमा मैले सुरुमा परीक्षण गरे। किन यो संस्करण किन्न महत्वपूर्ण छ? तपाईं अदृश्य वाटरमार्कहरू बनाउन सक्नुहुन्छ ... !!! जसले तपाईंको फोटोहरू नष्ट गर्दैन।
निकोल डीरोसा, अगस्त १,, २०२०, ०:14::2020
कहिले पनि मुद्दा हैन - एक विश्वसनीय अनुप्रयोग जुन सँधै कार्य गर्दछ मलाई कसरी चाहिन्छ। निश्चित रूपमा सिफारिस गर्नुहोस्!
देवी महारिनी, जुलाई,, २०२०, ०:3:१:2020
सधैं यो प्रेम। तपाईको द्रुत प्रतिक्रियाको लागि धन्यबाद। यो मलाई चाहिएको छ पहिले नै २०१ 2017 पछि प्रयोग गर्नुहोस्, अझै पनि यसलाई मनपर्दछ
iWatermark + 3.5. Android एन्ड्रोइडको लागि - तपाईंको अनमोल Android फोटो र भिडियोहरू सुरक्षित गर्नुहोस्
तुरुन्त रिलीजका लागि: मिति: / / २/ / १ O अवलोकन सैन फ्रान्सिस्को, CA - iWatermark, नम्बर १ हो र केवल water वटा प्लेटफर्महरू, आईफोन / आईप्याडका लागि मात्र वाटरमार्किंग उपकरण उपलब्ध छ,
सेप्टेम्बर 24, 2017	कुनै टिप्पणी
iWatermark + Android का लागि जारी गरियो। तपाईंको फोटो र भिडियोहरू सुरक्षित गर्नुहोस्।
तत्काल रिलीजका लागि: मिति: //२7/१ O अवलोकन प्रिन्सभिल, HI - बेर आश्चर्यजनक, LLC। - iWatermark + Android रिलिज को लागी। IWatermark + Q को साथ तपाईंको फोटो र भिडियोहरू सुरक्षित गर्नुहोस्:
जुलाई 24, 2017	कुनै टिप्पणी
वर्षको फोटोग्राफी अनुप्रयोग, iWatermark +। अब एन्ड्रोइड को लागी उपलब्ध छ - सुरक्षित र आफ्नो सामाजिक मीडिया फोटोहरु को रक्षा गर्नुहोस्
तत्काल रिलीजको लागि: सदस्यता रद्द अपडेट ईमेल ठेगाना हेर्नुहोस् अनलाइन सदस्यता ट्विटरमा साझा गर्नुहोस् फेसबुकमा DATE: नोभेम्बर १,, २०१ O अवलोकन प्रिन्सभिल, HI - प्लम अमेजिंग, LLC। - iWatermark को क्षमता
नोभेम्बर 16, 2015	कुनै टिप्पणी
iWatermark + मद्दत
- निर्यात / आयात र निश्चित छ। नयाँ संस्करण 6.7.9 चाँडै जारी हुनेछ।
1/10/22 संस्करण 6.7.8 जारी गरियो iWatermark र iWatermark Lite दुवैको नयाँ संस्करण। लाइट संस्करण एप्पलबाट डाउनलोड गर्न नि:शुल्क छ र नि:शुल्क रहन्छ। यसले लाइट एपलाई मानिसहरूसँग साझेदारी गर्न बनाउँछ किनभने तिनीहरूले खरिद गर्नु अघि सबै सुविधाहरू प्रयास गर्न सक्छन्। यसमा इन-एप खरिदहरू छन् त्यसैले पैसा बचत गर्न सबै सुविधाहरू र वाटरमार्कहरू व्यक्तिगत रूपमा वा सबै एकै पटक खरिद गर्न सकिन्छ। सबै सुविधाहरू उपलब्ध छन् र प्रयोग गर्न सकिन्छ तर प्रत्येक फोटोमा एउटा सानो, 'iWatermark सँग सिर्जना गरिएको' देखा पर्दछ जबसम्म त्यो व्यक्तिगत वाटरमार्क खरिद हुँदैन र यसलाई हटाइन्छ। वा सम्पूर्ण प्याकेज खरिद गरिएको छ जसले सबै वाटरमार्कहरूको लागि 'iWatermark सँग सिर्जना गरिएको' हटाउँछ।
लाइटमा प्रयोगकर्ताहरूका लागि उपहारहरू छन्। उपहारहरू टेक्स्ट वाटरमार्क, टेक्स्ट वाटरमार्कको साथ फोटोहरू वाटरमार्क गर्ने क्षमता र एप्पल फोटो एप भित्र वाटरमार्क गर्ने क्षमता हुन्। कसैले टेक्स्ट वाटरमार्क बनाउन सक्छ र यसलाई फोटोमा लागू गर्न सक्छ वा Apple Photos एप भित्र टेक्स्ट वाटरमार्क प्रयोग गर्न सक्छ र ती दुवै नि:शुल्क उपहार इन-एप वस्तुहरू भएकाले 'iWatermark सँग सिर्जना गरिएको' ती वाटरमार्क गरिएका फोटोहरूमा देखा पर्दैन। त्यसोभए, लाइट संस्करण मानिसहरूसँग साझा गर्नको लागि उत्तम हो किनभने तिनीहरूले सबै कुरा निःशुल्क परीक्षण गर्न सक्छन् र आफूले चाहेको कुरा खरिद गर्न सक्छन्।
फोटो र कम्तिमा एउटा वाटरमार्क भएको लाइट संस्करणमा तपाईंले फोटोको तल देख्नुहुनेछ "iWatermark सँग सिर्जना गरिएको" त्यो ब्यानरमा ट्याप गर्नुहोस् एप स्टोर पृष्ठमा जानको लागि, जहाँ 18 वस्तुहरू बिक्रीमा छन्: 12 वाटरमार्क प्रकारहरू,3"वाटरमार्किङ। क्षमताहरू" (फोटो, भिडियो र इन-प्लेस सम्पादन), र3"बन्डलहरू" (2-का लागि-1-जस्तै सम्झौताहरू, र "सबै अपग्रेड गर्नुहोस्")। केहीको मूल्य शून्यमा छ, र यसैले "उपहारहरू" (जस्तै TEXT वाटरमार्क)।
स्टोरमा प्रवेश गर्दा, एउटा "बिक्री वस्तु" छोटकरीमा फ्ल्यास हुन्छ कि यो खरिद गर्दा तपाईंले प्रयास गरिरहनुभएको सुविधाको लागि "iWatermark सँग सिर्जना गरिएको" ब्यानर हट्नेछ।
नयाँ फन्ट Caveat थपियो
हस्ताक्षर वाटरमार्क अब अन्डू/रिडू छ
सुधारिएको इन्स्टाग्राम समर्थन
इन्स्टाग्राम र अन्य मिडियामा पोस्ट गर्नु अघि iWatermark+ लाई अन्तिम चेकपोइन्ट बनाउनुहोस्।
यो फोटो होस् वा भिडियो - यसलाई पहिले वाटरमार्क गर्नु सधैं बुद्धिमानी हुन्छ।
संस्करण 6.7 मा हामीले एउटा उत्कृष्ट नयाँ सुविधा थप्यौं। तपाईं अब आफ्नो वाटरमार्क निर्यात र आयात गर्न सक्नुहुन्छ। यो एक साँच्चै महत्त्वपूर्ण सुविधा हो किनकि यसले अब तपाइँलाई तपाइँको सबै मूल्यवान वाटरमार्क सिर्जनाहरू जगेडा गर्न अनुमति दिन्छ जुन तपाइँले समय बिताउनुभएको छ। अझ राम्रो तपाईं अब ती वाटरमार्क फाइलहरू साथीहरूसँग साझेदारी गर्न सक्नुहुन्छ जसले iWatermark+ वा तपाईंको कम्पनी भित्र आधिकारिक वाटरमार्कको रूपमा प्रयोग गर्दछ। यसलाई प्रयोग गर्न, हामी तुरुन्तै ब्याकअप गर्न सिफारिस गर्छौं, जानुहोस् 'वाटरमार्क सूची'जहाँ तपाइँ २ नयाँ आइकन देख्नुहुनेछ।
तल nav पट्टी मा माथि तीर संग बक्स तपाइँ निर्यात/शेयर/ब्याकअप आफ्नो वाटरमार्क गर्न को लागी अनुमति दिन्छ।
तल nav पट्टी मा तल तीर संग बक्स तपाइँ एक .iw+ फाइल पहिले iWatermark+ बाट निर्यात बाट वाटरमार्क आयात गर्न को लागी अनुमति दिन्छ। तपाइँ जिप र ईमेल मार्फत .iw+ फाइलहरु साझा गर्न सक्नुहुन्छ वा जे होस् तपाइँ मानिसहरु वा एक कम्पनी भित्र चाहानुहुन्छ।
यहाँ अधिक जानकारी.
पहिलो पटक प्रयोगकर्ता? रमाईलो र छोटो iWatermark+ भिडियो ट्यूटोरियल संग छिटो छिटो गति प्राप्त गर्नुहोस्।
सही अनुमति सेटिंग सरल तर आलोचनात्मक छ, कृपया यसलाई पढ्नुहोस्।
-म्यानुअल को उपयोग गरी
कृपया प्रश्नहरुको उत्तर दिन को लागी पहिले म्यानुअल जाँच गर्नुहोस्। अनुप्रयोग मा प्रत्येक पृष्ठ मा एक छ? तल दायाँ। प्रत्येक? एक फरक लिंक छ र अनुप्रयोग को विशेष भाग को लागी प्रासंगिक म्यानुअल को फरक भाग जान्छ। तपाइँ म्यानुअल यहाँ र/वा तपाइँको कम्प्युटर मा पढ्न सक्नुहुन्छ। बुकमार्क तपाइँको कम्प्यूटर मा लि then्क तब यदि तपाइँ एक प्रश्न छ तपाइँ एक ठूलो स्क्रीन मा म्यानुअल को आनन्द उठाउन सक्नुहुन्छ। त्यसो गर्न को लागी म्यानुअल लिंक को प्रतिलिपि गर्नुहोस् र ईमेल लाई लि yourself्क ईमेल गर्नुहोस् वा यसलाई टाइप गर्नुहोस्:
आईओएस संस्करणमा परिवर्तनको लगको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
म्याक को लागी iClock र CopyPaste वा iWatermark प्रो को लागी जाँच गर्नुहोस् वा हाम्रो साइट बाट सीधा जीत। यो ट्याप गर्नुहोस् लिङ्कले plumamazing.com साइटमा कुनै पनि एपको लागि तपाईंको कार्टमा स्वचालित 30% छुट प्राप्त गर्नेछ।()
जब तपाईं इन्स्टाग्राम वा अन्य सामाजिक मिडिया प्रयोग गर्नुहुन्छ, याद गर्नुहोस्, सूक्ष्म वाटरमार्कहरू उत्तम हुन्छन्। हामी तपाइँ सबै रचनात्मक मानिसहरूलाई तपाइँको काम देखिन मद्दत गर्न चाहन्छौं। IWatermark अनुसरण गर्नुहोस्ट्वीटर, - फेसबुक, @ इन्स्टग्राम, @Pinterest, इत्यादि) र तपाइँको उत्तम आर्टवर्कहरू ट्याग गर्नुहोस् # iWatermark फिचर गर्नका लागि!
हामी तपाईंलाई यो जान्न चाहन्छौं कि हामी साँच्चिकै star तारा समीक्षालाई सराहना गर्छौं, अब एक हजार भन्दा बढि मानिसहरू छन्। धन्यवाद! धेरै अनुप्रयोगहरूको विपरित हामी लगातार iWatermark + अपडेट गर्दैछौं। याद गर्नुहोस् हामीलाई तपाईका सुझावहरू सुन्न मन पर्छ।
यदि तपाईंलाई जारी सुधारहरू मनपर्दछ र यो जारी राख्न चाहनुहुन्छ भनेकृपया एक अनुप्रयोग स्टोर समीक्षा सबमिट गर्नुहोस् र / वा तपाईंको साथीहरूलाई (विशेष रूपमा फोटोग्राफरहरू) अनुप्रयोगको बारेमा जान दिनुहोस्। तपाईं द्वारा एक साधारण उल्लेख फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, Pinterest मा वेबसाइट, इत्यादिले कसैलाई डाउनलोड गर्न निर्णय गर्न मद्दत गर्दछ, जब ती खरीद गर्दछ यसले हामीलाई तपाईंको लागि सुधार गर्न मद्दत गर्दछ। धेरै धन्यवाद!
समाचार IWatermark + को बर्षको १०० उत्तम अनुप्रयोगहरूको सूचीमा नम्बर is छ। यहाँ एक उत्कृष्ट सिंहावलोकन / ट्यूटोरियल छ iWatermark + लिंडा शर्मन द्वारा ट्यूटोरियल. Pinterest मा अधिक समीक्षा.
समस्या? हामीलाई ईमेल गर्नुहोस्। आईट्यून्समा १ स्टार समीक्षा जब तपाईं फेला पार्न सक्नुहुन्न सेटिंगले तपाईंको वा हाम्रो लागि केही गर्दैन। अनुप्रयोगमा मुख्य पृष्ठबाट हामीलाई सम्पर्क गर्न ट्याप गर्नुहोस्? तल दायाँमा आइकन। त्यो तपाईंलाई पुस्तिकामा लैजान्छ र नेभ बारमा शीर्ष केन्द्रमा एक हो, 'टेक सपोर्ट', क्लिक गर्न लिंक। हामी तपाईंबाट सुन्न चाहान्छौं यदि तपाईंलाई प्रश्न हो कि त्यो हो छैन यो म्यानुअल द्वारा कभर। धन्यबाद।
अनुप्रयोगहरूले तपाईंको उपकरणमा अनुमतिहरू मार्फत जानकारीको जानकारीमा पहुँच छ कि छैन नियन्त्रण गर्दछ। पहिलो पटक जब तपाई आई-वाटरमार्क + सम्वाद प्रयोग गर्नुहुन्छ3प्रकारका जानकारी स्थान, फोटो र क्यामेराको साथ काम गर्न सोध्नेछ। उदाहरण को लागी यदि तपाई डायलग आउँदा फोटोहरु पहुँच गर्न अनुमति दिनुहुन्न भने तपाई आफ्नो फोटोहरू खोल्न सक्नुहुन्न।
फोटो लिन iWatermark + क्यामेरा पहुँच गर्न आवश्यक छ। यसका लागि केवल 'ठिक' ट्याप गर्नुहोस्। यसले अनुप्रयोगमा क्यामेरा खोल्न र प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ।
जब तपाईं पहिलो तस्बिर वा भिडियो खोल्न प्रयास गर्नुहुन्छ तपाईं यस एप्पल अनुमतिहरू संवादमा प्राप्त गर्नुहुनेछ। किनकि आईवटरमार्क + वाटरमार्कहरू एकल र फोटोहरूका ब्याचहरूमा यसलाई आवश्यक पर्दछ 'सबै फोटाहरूमा पहुँच' यो अनुमति सही तरीकाले सेट गर्न आवश्यक छ। एरोले विकल्पमा औंल्याउँछ।
महत्वपूर्ण: यदि तपाईंले पहिलो पटक अनुमति अस्वीकार गर्नुभयो भने फोटोहरू, वाटरमार्किंग फोटोहरू र अन्य धेरै वस्तुहरू चयन गर्दा काम गर्दैन। ठिक गर्नका लागि तपाईले एप्पलको सेटिंग अनुप्रयोगमा गएर र यहाँ 'iWatermark +' मा टाइप गरेर अनुमति परिवर्तन गर्न आवश्यक छ:
त्यसो हो भने iWatermark + 'का सेटिंग्स पाउन' iWatermark + 'टाइप गर्नुहोस्। Yay, new iOS 14 सुविधा!
IWatermark + को सेटिंग्स परिवर्तन गर्नका लागि, तपाईंको फोनमा सेटिंग्स अनुप्रयोग खोल्नुहोस् iWatermark + मा तल स्क्रोल गर्नुहोस्। यो कुरा निश्चित गर्नुहोस् कि फोटोहरू (तल) सँग यसको अनुमति सेट गरिएको छ 'सबै फोटोहरू'
तस्विर लिनका लागि iWatermark + लाई फोटोमा स्थान जानकारी पहुँच गर्न आवश्यक पर्दछ। त्यो एक 'प्रयोग गर्दा' मा सेट भयो। यो महत्त्वपूर्ण छ किनकि जीपीएस डाटा हेर्न र त्यस जानकारीलाई वाटरमार्क गरिएका फोटोहरूमा हटाउन अनुमति दिनुहोस्। यसले ट्याग वाटरमार्कहरूको उपयोगलाई पनि अनुमति दिन्छ।
यहाँ iWatermark + मा तपाइँको एक खुट्टा दिन ट्यूटोरियल भिडियो को एक प्लेलिस्ट छ। लेजर ट्याब्लेट वा म्याक वा विन्डोज मोनिटरमा हेर्न यो सजिलो छ। सबै धेरै छोटो भिडियोहरू हेरेर तपाईंले धेरै लाभ उठाउनुहुनेछ। यस खेलाडीले भिडियोको श्रृंखला खेल्नेछ जुन तपाईं कुनै पनि समयमा रोक्न सक्नुहुन्छ। व्यक्तिगत भिडियोहरू तल तिनीहरूको सेक्सनमा पनि फेला पर्‍यो। ट्यूटोरियलहरूको सूची हेर्न प्लेयरको शीर्ष बाँया छुनुहोस्। तिनीहरूले कथन समावेश गर्दछ, यदि तपाईं ट्यूटोरियल सुन्न सक्नुहुन्न निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको भोल्युम अप छ र मौन मोड स्विच गरिएको छ।
IWatermark डाउनलोड गर्नका लागि धन्यबाद + iWatermark परिवार को सब भन्दा नयाँ र सबै भन्दा उन्नत सदस्य। iWatermark मा सबैभन्दा लोकप्रिय बहु प्लेटफार्म उपकरण उपलब्ध छ आईफोन / आईप्याड & Android (दुबै iWatermark र iWatermark +) को रूपमा र म्याक र विन्डोज iWatermark प्रो को रूपमा। iWatermark ले तपाइँको कुनै पनि फोटो वा भिडियोमा तपाइँको व्यक्तिगत वा व्यावसायिक वाटरमार्क थप्न अनुमति दिन्छ। एकचोटि यो वाटरमार्क थपियो तपाईंको फोटो र कलाकृतिको तपाईंको सिर्जना र स्वामित्व प्रदर्शन गर्दछ।
इवाटरमार्क भनेको के हो? iWatermark पेशेवर फोटोग्राफी सफ्टवेयर हो जसले एक नयाँ प्रकारको वाटरमार्किंगलाई अनुमति दिन्छ। यसले दृश्य र अदृश्य डिजिटल वाटरमार्क (कुनै अन्य अनुप्रयोगमा फेला परेन) को प्रयोग गर्दछ फोटोलाई यसको सिर्जनाकर्तासँग जडान गर्नका लागि।
iWatermark अद्वितीय छ, यी सुविधाहरू कुनै पनि अन्य वाटरमार्क अनुप्रयोगमा फेला परेन:
All सबै plat प्लेटफार्महरूमा उपलब्ध छन्।
One एउटा वा थप्नुहोस् बहु पानी चिन्ह एक साथ फोटो, फोटो वा भिडियो मा।
✓ ब्याच वाटरमार्क १ वा एक पटकमा धेरै फोटोहरू।
Processing प्रशोधन गर्नु अघि फोटो (हरू) मा वाटरमार्क (हरू) को प्रत्यक्ष पूर्वावलोकन।
✓ ब्याच पोर्ट्रेट, ल्यान्डस्केप, विभिन्न रिजोलुसनहरू र वाटरमार्क प्रत्येक ठाउँमा ठाउँमा देखिन्छ।
Beautiful सुन्दर ईन्ग्रेभ र एम्बोस गरिएको विशेष पाठ प्रभाव सेट गर्नुहोस्।
Multi बहु-स्थानमा वाटरमार्क टाईलि,, घुमाएर र फोटोमा खाली ठाउँ हावा हो।
हामी तपाईको फोटोलाई कस्टमाइज गर्नका लागि गर्नुहुने सबै कुरा विचार गर्दछौं, यसलाई आफ्नै बनाउने, वाटरमार्कको लागि। विगतमा वाटरमार्कहरू आविष्कार गरिएको थियो र आईडी आईटमहरू जस्तै टिकटहरू, मुद्रा, बैंक नोटहरू, राहदानीहरू र अन्य आधिकारिक कागजातहरूमा प्रयोग गरियो। आजकल, उस्तै बाटोमा, डिजिटल वाटरमार्कहरूले तपाईंको फोटो र भिडियोहरूमा तपाईंको पहिचान र शैली समेट्छ। फोटोग्राफर एसेल एडम्स एक विशिष्ट शैली थियो जुन आफ्नो फोटोहरूलाई चिनो लगाउँदछ, जस्तो कि अद्वितीय चित्रकला शैली मोनेट उसको चित्रहरु चिन्ह लगाउँदछ। एन्सेल एडम्स कालो र सेतो, स्पष्टता, कन्ट्रास्ट, विशाल, अव्यवस्थित, र राजसी परिदृश्यहरू आफ्नो हस्ताक्षरको रूपमा प्रयोग गरे पनि उनले आफ्नो काममा हस्ताक्षर गरे पनि। ठूला फोटोग्राफरहरू र कलाकारहरू जस्तो तपाईं आफ्नो कार्य शैली गर्न सक्नुहुनेछ ताकि यो केवल सुन्दर र चिन्न सकिने मात्र होइन तर तपाईंको सिर्जनाहरूको रक्षा गर्न मद्दत गर्दछ। यसैले हामी प्रत्येक आइटमहरू मेटाडाटा, स्टेगोमार्क, रिसाइज र वाटरमार्कको रूपमा फिल्टरहरू देख्छौं किनकि उनीहरूले तपाईंको विशेष शैलीको साथ फोटो इम्बुइ गर्न सक्दछन्।
तल एउटा भिडियो छ जुन यो थप व्याख्या गर्दछ।
तपाईंसँग आईफोनको स्वामित्व हुन सक्छ र आफैंलाई पेशेवर फोटोग्राफर ठान्नुहुन्न तर आईफोन पेशेवर क्यामेरा हो। यसले प्रकाश, र and र बनावटका साथ आश्चर्यजनक कार्यहरू गर्न सक्छ जुन केही वर्ष अघि असम्भव थियो। यो सुविधाजनक, द्रुत, हल्का र सँधै तपाईंसँग हुन्छ। यो नजिक र टाढा, चित्र र ल्याण्डस्केपको लागि उत्कृष्ट छ। कुनै पनि दिन यी फोटाहरू वा भिडियो क्याप्चर गर्न सक्ने क्षमता छ जुन अद्वितीय हो र साझेदारी गरिएको छ जब भाइरल हुन सक्छ। सहि फोटोले पैसा र प्रसिद्धि ल्याउन सक्छ। तर यदि यो तपाईको लागि महत्त्वपूर्ण छैन भने यो तयार हुन चोट पुर्‍याउँदैन तपाई भविष्यमा यस्तो ठाउँ हुन सक्नुहुनेछ जहाँ भगवान, प्रकृति, मानिस वा पशुको कुनै घटना घट्छ र इतिहास बनाइन्छ। बाँकी मानवताका लागि यसलाई समात्न तयार हुनुहोस्।
क्यामेराबाट फोटो अज्ञात छन्। जब तपाईं फोटो लिनुहुन्छ र साझेदारी गर्नुहुन्छ, तपाईंको साथीहरूले यसलाई साझा गर्छन्, तब उनीहरूका साथीहरू, तब कुल अपरिचितहरू। प्रत्येक पटक यो कम र कम छ र अन्ततः तपाईं संग कुनै सम्बन्ध छ। विश्वको बाँकी भागमा तपाईंको फोटो 'निर्माता अज्ञात' हो। त्यो केवल दु: खी छ। धेरै उत्कृष्ट तस्विर भाइरल भइसकेका छन् (बेतहाता लोकप्रिय बनेका छन्) जसमा मालिकको पहिचानको कुनै संकेत छैन। यसको मतलब हो, अरूलाई कुनै पनि तरीका बिना स्वीकृति, धन्यवाद वा भुक्तानी मालिकलाई। यस समस्याको समाधान आईवटरमार्क हो, जसको उद्देश्य तपाईंको फोटोसँग तपाईंको पहिचानका साथ विभिन्न प्रकारका दृश्य र अदृश्य रूपमा निहित गर्नु हो। आईवाटार्मार्कमा प्रविधि र १२ वटरमार्क उपकरणहरूले तपाईंलाई फोटोहरू हस्ताक्षर, निजीकृत, शैलीबद्ध, सुरक्षित र सुरक्षा गर्न मद्दत गर्छन्। यसले तपाईंको नाम, कम्पनीको नाम, url वा ईमेल तपाईंको फोटोहरूसँग सम्बन्धित छ भनेर निश्चित गर्न विभिन्न तरिकाहरू दिन्छ।
२ अनुप्रयोगहरू, नि: शुल्क र भुक्तान गरिएको
त्यहाँ नि: शुल्क र भुक्तान गरिएको संस्करण छ
आईवटरमार्क + नि: शुल्क
धेरै व्यक्तिहरूले अनुप्रयोग र सुविधाहरू प्रयोग गर्न नि: शुल्क प्रयास गर्छन्। यसको एक हरियो ब्यानरमा नि: शुल्क संग आईकन छ। योसँग कुनै विज्ञापन छैन र तपाईंलाई सबै सुविधाहरू प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ तर साथै प्रत्येक फोटोमा हाम्रो वाटरमार्क थप गर्दछ जुन भन्छ, 'आईवटरमार्क + फ्रि' को साथ सिर्जना गरिएको '। तपाईंलाई यसको प्रयोग जारी राख्न वा भुक्तान गरिएको अनुप्रयोगमा अपग्रेड गर्न स्वागत छ जुन हाम्रो थप वाटरमार्क छैन।
यो सशुल्क संस्करण iWatermark + को विकास समर्थन गर्दछ। प्रत्येक चोटि कसैले प्रतिलिपि खरीद गर्दा यसले अनुप्रयोगलाई सुधार गर्न थप प्रोग्रामि supports समर्थन गर्दछ जसले सबैलाई फाइदा पुर्‍याउँछ। हो! सशुल्क अनुप्रयोगले तपाईंको फोटोमा हाम्रो वाटरमार्क थप गर्दैन। सशुल्क संस्करण प्राप्त गरे पछि नि: शुल्क संस्करण मेटाउनको लागि सम्झनुहोस् किनकि तपाईंलाई अब आवश्यक पर्दैन।
अनुप्रयोगहरूले प्राथमिकता साझेदारी गर्दछ त्यसैले तपाईंले iWatermark + Free मा सिर्जना गरेको कुनै पनि वाटरमार्क iWatermark + मा उपलब्ध हुनेछ जब तपाईं यसलाई खरीद गर्नुहुन्छ।
त्यहाँ धेरै अन्य संस्करणहरू छन् जुन तपाईं सक्नुहुन्छ हाम्रो साइटमा खोज्नुहोस्।
महत्वपूर्ण: iWatermark ले केवल तपाईंको फोटोहरूको प्रतिलिपिमा वाटरमार्क गर्दछ। यसले कहिले पनि मूल फोटो परिवर्तन गर्दैन। सुरक्षाको लागि तपाईंको मूल फोटोहरू मेट्नुहोस् र तिनीहरूलाई जगेडा गर्न सधैं सम्झनुहोस्।
iWatermark + अतिरिक्त ग्राफिक्सको २ लाइब्रेरीहरूको साथ आउँदछ।
5000 SVG (सबै आकारहरूमा पूर्ण रूपले रेन्डर गर्दछ) सबै प्रकारका वस्तुहरू र प्रतीकहरूको ग्राफिक्स र
Bit० बिटम्याप ग्राफिक्स (उच्च रेस फोटोमा पिक्सेलेट गर्न सकिन्छ) प्रसिद्ध व्यक्तिको हस्ताक्षर, लोगोहरू, इत्यादि।
आईवटरमार्क + ले वाटरमार्कहरू सिर्जना गर्न अविश्वसनीय रूपमा सजिलो बनाउँदछ र चाँडै तपाईं आफ्नै सिर्जना गर्न चाहानुहुन्छ। तपाईंको वॉटरमार्कहरू त्वरित पुनः प्रयोगका लागि विभिन्न प्रकारका आवश्यकताहरू र फोटोहरूका प्रकारहरू सुरक्षित गर्नुहोस्।
iWatermark केवल एक अनुप्रयोग मात्र होईन 'विस्तार'जुन आईओएस फोटो अनुप्रयोगका साथै अन्य अनुप्रयोगहरूमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसको मतलव तपाईले अब चाँडै वाटरमार्किंग क्षमताहरूमा पहुँच पाउन सक्नुहुनेछ केवल iWartermark + मा मात्र होइन तर अन्य अनुप्रयोगहरूमा पनि, यो धेरै उपयोगी हुन सक्छ।
एप्पलको फोटो अनुप्रयोग भित्र एक विस्तारको रूपमा प्रयोग गरीएको छ, iWatermark वाटरमार्क तर बचत एप्पल फोटो अनुप्रयोग द्वारा ह्यान्डल गरिएको छ। फोटो अनुप्रयोगले त्यस तस्बिरमा सबै परिवर्तनहरू बचत गर्दछ, त्यसैले वाटरमार्क र अन्य परिवर्तनहरूलाई तहहरूको रूपमा बचत गरिन्छ। यदि तपाईं यसलाई हटाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईंले फेरि सम्पादन थिच्नुहोस् र मूल फोटोमा फिर्ता जान रिभर्टमा थिच्नुहोस्।
१. मिडिया चयन गर्नुहोस् (फोटो, फोटो वा भिडियो)।
२. तब वाटरमार्क वा वाटरमार्कहरू (हाइलाइट वा चेकमार्क) चयन गर्नुहोस्। वा, वैकल्पिक रूपमा, १२ वटरमार्क प्रकारहरूबाट नयाँ सिर्जना गर्नुहोस्, 'सम्पन्न' हिट गर्नुहोस्।
Save. क्यामेरा एल्बममा तपाईंको वाटरमार्क गरिएको फोटो बचत गर्नुहोस् वा साझेदारी गर्नुहोस् (यसले यसलाई क्यामेरा एल्बममा राख्छ र iWatermark + एल्बम पनि), ईमेल, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, Pinterest, बफर, वा Evernote, आदि।
IWatermark + खोल्नुहोस्। यो हामी के भन्छौं क्यानभास पृष्ठ। यहाँ तपाईं सिर्जना शुरू र आफ्नो कला काम पूर्वावलोकन। यसको तल नव बार छ।
१. पहिले, छुनुहोस्मिडिया चयन गर्नुहोस्आइकन
एक फोटो, फोटो, भिडियो वा आयात फाईल (क्लाउड सेवाबाट) चयन गर्न माथिको स्क्रीनशटको तल बायाँ।
२. 'वाटरमार्क' प्रतिमा छुनुहोस्
माथिको क्यानभास पृष्ठको शीर्षमा (माथि) हामी कल गर्छौं वाटरमार्कहरूको सूची हेर्नका लागि वाटरमार्क सूची पृष्ठ (तल) तपाइँ नयाँ पृष्ठमा नयाँ कस्टम वाटरमार्क सिर्जना गर्न पृष्ठको शीर्षमा 'सिर्जना गर्नुहोस् वाटरमार्क' चयन गर्न सक्नुहुनेछ तर केही क्षणको लागि त्यस रमाइलोमा रोक्नुहोस् र यसको सट्टामा समावेश गरिएको वाटरमार्क चयन गर्नुहोस्। त्यसो गर्न तलको विन्दुमा जानुहोस्।
Next. वाटरमार्क 'प्रतिलिपि अधिकार' (माथिको स्क्रीनशट) को बाँया तिर अर्को ट्याप गर्नुहोस्। एक ट्यापमा वाटरमार्क खैरो / निस्क्रियबाट निलो / सक्रिय / हाइलाइट गरिएको / अगाडि निलो चेकमार्कको साथ जान्छ वाटरमार्क अब प्रयोगमा छ भन्ने स .्केत गर्न। 'सकियो' बटन छुनुहोस् मुख्य स्क्रिनमा (तल) फर्कन र अब तपाईं क्यानभास पृष्ठमा त्यो प्रतिलिपि अधिकार वाटरमार्क देख्नुहुनेछ।
Touch. यो छुनुहोस् र गेस्चरहरू (माथिको) द्वारा समायोजित गर्नुहोस्। वा वाटरमार्क मा डबल क्लिक वा सेटिंग्स आइकन (माथी) छुने मार्फत सेटि toहरूमा जानुहोस्।
महत्वपूर्ण: माथिको उदाहरणले १ वटरमार्क प्रयोग गर्दछ तर आईवटरमार्क + ले १ मात्र होइन २,,,…… वा अधिक वाटरमार्क एक साथ चयन गर्दछ।
Screen. मुख्य स्क्रिनमा नेव बारमा सेयर बटन क्लिक गर्नुहोस् तपाईंको पहिलो वाटरमार्क गरिएको फोटो साझा गर्न। आईओएस १ On मा। यो यस्तो देखिन्छ। 'रिसेन्टहरू' बचत गर्नका लागि 'छवि बचत गर्नुहोस्' ट्याप गर्नुहोस् तर साथसाथै 'iWatermark + फोल्डर' मा पनि बचत गर्नुहोस्।
हो! तपाईंले भर्खर आफ्नो पहिलो फोटो वाटरमार्क गर्नुभयो, सरल। तर पर्खनुहोस्! म्यानुअल पछाडि अनुक्रमिक रुपमा जारी राख्नुहोस् वा ट्याप गर्नुहोस् तपाइँको पहिलो वाटरमार्क सिर्जना गर्न सीधा जानुहोस्।
क्यानभास पहिलो पृष्ठ हो जुन तपाईंले iWatermark + प्रविष्टि गर्दा देख्नुहुनेछ। यो तस्विरको पूर्वावलोकन हो र जहाँ तपाईं व्यवस्थित गर्न र तपाईं प्रयोग गर्न चाहानुभएको विभिन्न वटरमार्कहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। यो पृष्ठ साझा गर्नाले तपाईंको वाटरमार्क फोटो (हरू) निर्यात गर्दछ। पृष्ठको तल नेभिगेसन बार छ।
क्यानभास पृष्ठमा वाटरमार्क ट्याप गर्नुहोस् र तान्नुहोस्। टिप: यदि एक वाटरमार्क धेरै सानो छ एक पटक तपाईं ट्याप गर्नुहोस् एक पटक तपाईं ट्याप गर्न सक्नुहुन्छ र टाढा टाढा तान्न।
वाँटरमार्कको आकार परिवर्तन गर्न पिन्च र / वा जूम प्रयोग गर्नुहोस्।
वाटरमार्क घुमाउन वाटरमार्क र मोडमा थम्ब र फिंगर फिंगर राख्नुहोस्।
कि वाटरमार्क को लागी सेटिंग्स मा सीधा जान एक वाटरमार्क छुनुहोस्।
टच र प्रेसको साथ क्यानभासको सानो वर्ग क्षेत्र बृद्धि गर्नुहोस् (also थ्री टच पनि भनिन्छ)।
पृष्ठको तल 'नेभिगेसन बार' छ।
क्यानभास पृष्ठको तल यो नेभिगेसन बार छ। नवबारमा प्रत्येक आईकनले तपाईंलाई पृष्ठमा लग्दछ जुन पानी मार्कि ofको एक घटकको निरीक्षण गर्दछ।
क्रम मा माथी आईटमहरु तल नाम छ:
मिडिया चयन गर्नुहोस् जानकारी | वाटरमार्क सूची | सेटिंग्स | सेयरि | | मद्दत
स्ट्याम्प आइकनमा ब्याज २ ले हालै चयनित वाटरमार्कहरूको संख्या देखाउँदछ।
सेयर आइकनले सेयर गर्नका लागि तयार फोटोहरूको संख्याको ब्याज पनि देखाउँदछ।
मिडिया चयन गर्नुहोस्
जब तपाईं 'चयन मीडिया' प्रतिमा छुनुहोस्
फोटो, फोटो, भिडियो, फोटो टाँस्न वा फाईलहरू (क्लाउड) आयात गर्नका लागि यस संवाद तल देखाइएको छ।
यहाँ छ जहाँ तपाईं एक फोटो, फोटो को एक समूह, भिडियो, फोटो लिन, फोटो लिन, फोटो टाँस्न वा फाइल आयात गर्न छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। माथिको विवरणहरू, तल।
फोटो चयन गर्नुहोस् - १ फोटो चयन गर्नका लागि एप्पलको पिकर हो
फोटोको चयन गर्नुहोस् - हाम्रो फोटो पिकर हो जुन फोटोहरूको ब्याच चयन गर्न अनुमति दिन्छ। एक ट्याप गर्नुहोस् र लगातार चयनको लागि ड्र्याग गर्नुहोस्। वा पहिलो फोटोमा एक पटक ट्याप गर्नुहोस् र बीचमा सबै चयन गर्न अन्तिममा दुई पटक (धेरै उपयोगी)।
फोटो टाँस्नुहोस् - तपाईंले पहिले प्रतिलिपि गरेकोबाट आउँछ।
फाईल आयात गर्नुहोस् - (आईओएस मा) ले क्लाउड सेवाहरू जस्तै आईक्लाउड, ड्रपबक्स, वनड्राइभ, गुगल ड्राईव, इत्यादि छनौट गर्न अनुमति दिन एप्पल 'फाईलहरू' अनुप्रयोग खोल्दछ तपाईको उपकरणमा ती व्यक्तिहरू ती फाइलहरू ती सेवाहरूबाट डाउनलोड गर्न आवश्यक छ।
भिडियो चयन गर्नुहोस् - वाटरमार्किंगका लागि भिडियो चयन गर्न अनुमति दिन्छ।
मेटाउनको लागि फोटोहरू छान्नुहोस् - IOS मा फोटाहरू मेटाउने उत्तम / सजिलो तरीका। छवि ट्याप गर्नुहोस् र पछिल्लो फोटोमा जानुहोस् र पहिलो फोटोमा डबल ट्याप गरिएकोमा सबै फोटोहरू चयन गर्न डबल ट्याप गर्नुहोस्। ती सबै मेटाउनका लागि रद्दीटोकरीमा ट्याप गर्नुहोस्। होस् गर।
टिप: - 'छविहरू चयन गर्नुहोस्' मा बहु छविहरू चयन गर्न: ट्याप गर्नुहोस् र छवि पछि अन्तिम फोटोमा जानुहोस् र पहिलो फोटोमा दुई फोटोहरू ट्याप गरिएको पहिलो एकलबाट सबै फोटोहरू छान्न डबल ट्याप गर्नुहोस्। यो ह्यान्डियर / छिटो हो त्यसपछि कुनै पनि अन्य तस्बिरहरू मेटाउने प्रयास गर्दै।
टिप - नयाँ फोल्डर सिर्जना गर्नुहोस्: पूर्वनिर्धारित द्वारा iWatermark + ले यसको आफ्नै फोल्डर creates iWatermark + creates सिर्जना गर्दछ। यो नाम जुन प्राथमिकताहरूमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ (हामी यसलाई यसैले छोड्ने सल्लाह दिन्छौं)।
म्याकमा फाइल प्रकारहरू बुझ्नको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ। आईओएसमा एप्पलले यसलाई सरल राख्ने र फाईल विस्तार वा फाइल प्रकारहरू नदेखाउने निर्णय गरे। तर वाटरमार्किंगका लागि व्यक्तिहरूले फाइलको प्रकार थाहा पाउनुपर्दछ उनीहरू वाटरमार्किंग गर्दैछन्। यो विशेष रूपमा महत्त्वपूर्ण छ जब लोगो आयात गर्ने क्रममा (जुन उत्तम देखिनु पर्ने हुन्छ। png हुनुपर्दछ)। त्यसो भए, हामी iWatermark + मा फोटोहरूको लागि सजिलैसँग एक्स्टेन्सनहरू हेर्न क्षमता जोड्यौं
फाइल विस्तारहरू कसरी हेर्ने: मिडिया प्रतिमा ट्याप गर्नुहोस्, निश्चित गर्नुहोस् 'फोटोहरू चयन गर्नुहोस् (जानकारीको साथ) ' फाइल प्रकार प्रदर्शित थम्बनेलहरू हेर्नको लागि, 'फोटो चयन गर्नुहोस्' होईन।
शीर्ष दाँयामा Tap ट्याप गर्नुहोस्। विभिन्न फाईल प्रकारहरू हेर्नुहोस्, हेिक, jpg, png, dng, gif, आदि। प्रत्येक थम्बनेलको माथि बायाँ तल स्क्रिनशटमा देख्न सकिन्छ। फोटो आकार, फोटो निर्माण समय / मिति को बीच घुमाउन फेरि Tap ट्याप गर्नुहोस्। उपयोगी जानकारी त्यो हो मात्र बहु फोटो पिकरमा एकल फोटो पिकरमा होइन। हो, तपाईं एकल फोटोहरूको लागि बहु पिकर पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईं मध्ये कोहीले सोध्नुहुनेछ, "किन केवल बहु-फोटो पिकरमा?" कारण हामी आफैले बहु-फोटो चयनकर्ता सिर्जना गरेका छौं जबकि एकल फोटो चयनकर्ता एप्पलद्वारा बनाइएको हो।
फोटो चयन पृष्ठमा गेस्चरहरू उपलब्ध छन्
'छविहरू चयन गर्नुहोस्' मा बहु छविहरू चयन गर्न: ट्याप गर्नुहोस् र छवि पछि अन्तिम फोटोमा जानुहोस् र डबल ट्याप गर्नुहोस् सबै फोटोहरू पहिलो एकलबाट ट्याप गरेको दुईवटा ट्याप गरिएकोमा।
छनौट गरिएको फोटोको साथ
, फोटो जानकारी हेर्नको लागि, नेभ बारमा बाँयाबाट दोस्रो आइकन। यहाँ तपाईं फाईल, छवि, क्रेडिट, स्टेगोमार्क र मेटाडाटाका लागि बटनका लागि ट्याबहरू देख्नुहुनेछ।
फाईल - नाम, सिर्जना, आकार, वर्णन र कुञ्जी शब्दहरू यदि आईटीटीसी डाटाबाट उपलब्ध छ भने। GPS डेटा यदि एक नक्शा मा हल छ भने।
छवि - क्यामेराबाट EXIF ​​जानकारी देखाउँदछ।
क्रेडिट - जसमा प्रयोगकर्ताले थपिएको डाटा समावेश गर्दछ यदि त्यहाँ फोटोशप, लाइटरूम वा iWatermark द्वारा ईबेड गरिएको छ।
StegoMark - सम्मिलित StegoMark पढ्न। पहिले स्टिगोमार्कको साथ फोटो खोल्नुहोस्। यदि तपाईं वा अरू कसैले तस्विरमा स्टिगोमार्क प्रयोग गर्नुभएको छ भने सन्देश पढ्नको लागि यस प्यानेलमा जानुहोस् र पासवर्ड प्रविष्ट गर्नुहोस् वा कुनै पासवर्ड प्रविष्ट गर्नुहोस् (यदि यो पासवर्ड बिना सिर्जना गरिएको हो भने) सन्देश पाठ प्रकट गर्न। कुनै पासवर्डको मतलब कुनै पनि iWatermark + प्रयोगकर्ताले सन्देश डेसिफर गर्न सक्दैन। एक पटक तपाईले पासवर्ड प्रविष्ट गर्नुभयो भने यदि पाठ सन्देश प्रकट गर्न एक क्लिक गर्नुहोस् 'डिटेक्ट' बटन।
मेटाडाटा - EXIF, IPTC, आदि को लागी शीर्ष बायाँ बटन।
एक छवि (EXIF) को बारे मा तकनीकी जानकारी क्यामेरा द्वारा बनाईएको हो। सामग्री जानकारी (IPTC / XMP) तपाई द्वारा फोटोग्राफर बनाईएको हो र थपिएको छ। EXIF, IPTC, TIFF, XMP सबै फोटोहरुमा जानकारी बचत गर्न को लागी बिभिन्न ढाँचाहरु छन्। तिनीहरू समयको साथ विकसित भएका छन्। थप जान्नका लागि तपाई आफ्नो ब्राउजरहरूको अधिक जानकारी फेला पार्न सक्नुहुन्छ।
भिडियोहरूसँग पनि जानकारी छ। एक पटक भिडियो मुख्य स्क्रीनमा छ क्लिक गर्नुहोस्
आइकन एक भिडियो को बारे मा जानकारी प्राप्त गर्न।
'भिडियो' ट्याबले त्यस भिडियोमा प्राविधिक जानकारी देखाउँदछ।
यदि मेटाडाटा वाटरमार्क सिर्जना गरिएको छ भने (तल) र यो जानकारीको साथ भिडियोलाई वाटरमार्क गर्न प्रयोग गरिन्छ।
त्यसोभए जब त्यो भिडियो आयात हुन्छ यो भिडियो जानकारीको 'क्रेडिट' ट्याब अन्तर्गत देखा पर्दछ:
वाटरमार्क सूची पृष्ठ जहाँ तपाइँ नयाँ वाटरमार्क (शीर्ष मा) बनाउन को लागी छनौट गर्न सक्नुहुन्छ र सबै उदाहरण र तपाइँको कस्टम वाटरमार्क (तल तल) राख्न सक्नुहुन्छ। यो वाटरमार्क सूची मा चयन वाटरमार्क वा वाटरमार्क क्यानभास पृष्ठ मा देखा पर्दछ। वाटरमार्क सूची पृष्ठ बाट तपाइँ चयन गर्न सक्नुहुन्छ, नक्कल, मेटाउन, पिन, आयात र निर्यात वाटरमार्क।
शीर्ष बायाँ मा 'संगठित गर्नुहोस्' ट्याप गर्नुहोस् त्यसपछि 'वा' प्रत्येक वाटरमार्क को क्रम को पुनर्व्यवस्थित गर्न को लागी दायाँ छेउ मा ड्रैगर आइकन ड्र्याग गर्नुहोस्। वा बायाँ छेउमा रातो बल छोएर वाटरमार्क मेटाउनुहोस्।
नाम द्वारा वाटरमार्क खोज्न म्याग्निफाइ glass ग्लास (शीर्षमा) ट्याप गर्नुहोस्।
शीर्षमा '+ नयाँ वटरमार्क सिर्जना गर्नुहोस्' वा तल आइकनमा ट्याप गर्नुहोस्। यसले तपाईंलाई 'नयाँ वाटरमार्क' पृष्ठमा लैजान्छ (माथिको दोस्रो स्क्रीनशट)। नयाँ वाटरमार्क सिर्जना गर्ने बारेमा थप जानकारीको लागि, तलको स्क्रीनशट ट्याप गर्नुहोस्।
तल फोटो पट्टी मा आँखा प्रतिमा ट्याप गर्नुहोस् तपाइँको फोटो मा एक वाटरमार्क पूर्वावलोकन गर्न।
ट्याप गर्नुहोस् -> | अर्को हाइलाइट गरिएको वाटरमार्कमा छिटो सर्नको लागि।
/ आइकन सबै चयनित वाटरमार्क को चयन रद्द गर्दछ। यो एक मा परिवर्तन हुन्छ ...
Nav तल नेभ पट्टी मा प्रतिमा तपाइँ स्वचालित रूपमा सबै पहिले चयन गरिएका वाटरमार्क पुन: चयन गर्न ट्याप गर्न सक्नुहुन्छ।
"सबै वाटरमार्कहरू अचयन गर्नुहोस्" / "वाटरमार्क पछाडि पुन: चयन गर्नुहोस्" - सबै वाटरमार्कहरू अचयन गर्नको लागि द्रुत तरीका। र तिनीहरूलाई एक स्पर्शमा फिर्ता चयन गर्न। यी कार्यहरू वाटरमार्क पृष्ठको शीर्षमा, र उपकरणपट्टीमा पनि सूचीबद्ध छन्।
वाटरमार्कको बायाँ तिर एकल ट्याप चयन गर्नका लागि, कुन चेकमार्कहरू र यसलाई निलोमा हाइलाइट गर्दछ। बायाँ तिर फेरि ट्याप अचयन गर्न।
धेरै वाटरमार्क चयन गर्नुहोस् अर्को मा ट्याप गर्नुहोस् यो पनि चयन गर्न को लागी।
सेटिंग्स आइकनमा एकल ट्याप
वा कहीं पनी वाटरमार्क को एक तिहाई मा, त्यो वाटरमार्क को लागी सेटिंग्स पृष्ठ मा जाने को लागी।
यो चयन गर्न वाटरमार्क को बायाँ दुई तिहाई मा कहीं ट्याप गर्नुहोस्।
डबल ट्याप एक वाटरमार्क यो चयन गर्दछ र सबै अन्य सबै छान्नुहोस् तब तपाइँ पूर्वावलोकन पृष्ठमा लैजान्छ।
ट्याप गर्नुहोस् र स्लाइड वाटरमार्क बायाँ "पिन / अन-पिन / हटाउनुहोस् / नक्कल" बटनहरू देखाउन। पिनले बीमा दिन्छ कि वाटरमार्क अचयनित हुन सक्दैन।
नया सिर्जना गर्नुहोस्
'वाटरमार्क सूची' को शीर्षमा 'नयाँ वाटरमार्क सिर्जना गर्नुहोस्' हो। यसलाई ट्याप गर्नुहोस् र तल देखिएको वाटरमार्क प्रकार सिर्जना गर्न छनौट गर्नुहोस्।
मा माथिको प्रत्येक वाटरमार्क प्रकार को बारे मा जान्नुहोस्वाटरमार्क प्रकारहरू' खण्ड।
Q: म कसरी वाटरमार्क वा वाटरमार्क ब्याकअप गर्न सक्छु?
A: यहाँ ट्याप गर्नुहोस् र उहाँ पढ्नुहोस्
Q: म कसरी वाटरमार्क नक्कल गर्ने?
A: त्यहाँ दुई तरिकाहरू छन्:
१) कुनै वाटरमार्कको नाम परिवर्तन गर्दा यसलाई डुप्लिकेट हुनेछ। नाम पछि २ राख्नको लागि परीक्षण गरीयो, हिट भयो, तपाईंसँग अब पुरानो जस्तै नयाँ वटरमार्क छ।
२) वाटरमार्क पृष्ठ मा पिन, नक्कल र बटन हटाउन वाटरमार्क बायाँ स्लाइड।
पिन - वाटरमार्क पिन गर्नुहोस् ताकि यो (सधैं चयनित) सबै समय मा छ। वाटरमार्क अब दायाँ तिर एक सानो पिन आइकन देखाउनेछ। यसलाई पुन: चयन गर्नाले यो बन्द हुँदैन। यो वाटरमार्क को लागी तपाइँ सबै समय मा चाहानुहुन्छ र दुर्घटना बाट बन्द गर्न चाहनुहुन्न। स्लाइड परिवर्तन गर्न र फेरि 'अन-पिन' छान्नुहोस्।
नक्कल - तपाइँलाई मनपर्ने एक वाटरमार्क लिन्छ र यसलाई क्लोन गर्दछ। तपाइँ तब एक नयाँ वाटरमार्क को लागी एक बिन्दु को रूप मा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
मेटाउन - त्यो वाटरमार्क पुरा तरिकाले मेटाउँछ। फिर्ता लिने छैन।
टिप: परिदृश्य अभिविन्यास (तल) स्थिति (वाहक, समय, ब्याट्री) शीर्ष मा हटाउँछ, अधिक ठाउँ प्रदान।
तल द्रुत भिडियो देखाउँछ कि यो कसरी भयो। भिडियो मा यो 'लक' लाई बुझाउँछ हामी 'पिन' शब्द परिवर्तन।
अन्तिम चयनित वाटरमार्कका लागि वाटरमार्क सेटिंग्स परिवर्तन गर्नुहोस्। टच सेटिंग आइकन
मुख्य पृष्ठमा हालै चयनित वाटरमार्कको लागि सेटिंग्स पृष्ठमा जान। तपाईं पनि वाटरमार्कको लागि सेटिंग्समा जान मुख्य पृष्ठमा एक वाटरमार्क ट्याप गर्न सक्नुहुन्छ।
साझेदारी / निर्यात
महत्वपूर्ण: एप्पलले बहु आईटमहरू क्यामेरा एल्बममा साझेदारी गर्न अनुमति दिन्छ तर एक पटकमा एक विस्तार विस्तारमा १ वस्तु मात्र। ब्याच प्रोसेसिंग केवल एप्पलको क्यामेरा एल्बममा छ।
साझेदारीले तपाईंको वाटरमार्क फोटो (हरू) र भिडियो मार्फत ईमेल मार्फत विस्तार विस्तारहरू निर्यात गर्न अनुमति दिन्छ, क्यामेरा एल्बम, एयरड्रोप, प्रिन्ट, प्रतिलिपि, इन्स्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, आदि मा बचत गर्नुहोस् साथै साथै यदि तपाईंसँग तिनीहरूको उपकरणमा स्थापना गरिएको छ भने गुगल ड्राईभमा साझा गर्दछ, ड्रपबक्स, टम्बलर, पिन्टेरेस्ट, इभर्नोट, बफर, लिंक्डइन आदि आईओएस sharing सेयरिंग विस्तार सुविधा प्रयोग गरी। साझेदारी विस्तार अनुप्रयोगहरूमा राखिन्छ र त्यो सेवामा फाईलहरू साझेदारी गर्न अनुमति दिन्छ। उदाहरण को लागी तपाइँको फोन मा Pinterest डाउनलोड र अब तपाइँ iWatermark + वा फोटो अनुप्रयोग बाट सीधा तपाइँको Pinterest खाता मा साझा गर्न सक्नुहुनेछ पाउनुहुनेछ। Tumblr, Evernote र अन्य सेवाहरूको लागि समान जसले साझेदारी विस्तारमा अन्तर्निर्मित तिनीहरूको आफ्नै अनुप्रयोग बनायो।
माथिको स्क्रिनशटमा ध्यान दिनुहोस् कि त्यहाँ थुप्रै पार्टी शेयरि sharing विकल्पहरू छन्, इन्स्टाग्राम, फेसबुक, टम्बलर, पिन्टेरेस्ट, इभर्नोट, हूट्सुइट, बफर र बढ्दो संख्यामा साझेदारी गर्ने एप्लिकेसनहरूले सूचनाको आदानप्रदानलाई समर्थन गर्दछ। अधिक हेर्न दायाँ स्क्रोल गर्नुहोस्। त्यसो भए, साझेदारी साझेदारी विस्तारहरू तपाईंले स्थापना गर्नु भएका अनुप्रयोगहरूमा निर्भर गर्दछ।
महत्वपूर्ण: निर्यात विस्तार हराइरहेको छ? यदि तपाईंसँग इन्स्टाग्राम, टम्बलर, इभर्नोट, बफर, इत्यादि जस्ता निर्यात विस्तार छ र तपाईं सूचीमा देख्नुहुन्न भने दायाँ तिर सबै बाटो स्क्रोल गर्नुहोस् र 'अधिक ...' आइकनमा थिच्नुहोस् तपाईंले त्यसलाई चालू गर्न सक्नुहुनेछ। प्रयोग गर्नुहोस्, बन्द नगर्नुहोस् र सूचीलाई पुन: व्यवस्थित गर्नुहोस्।
इन्स्टाग्राम - इन्स्टाग्राम अनुप्रयोग डाउनलोड गर्नुहोस् र iWatermark + माथिको साझेदारी / निर्यात क्षेत्रमा देखाउने छ। एप्पलको क्यामेरा अनुप्रयोगमा एक वर्ग फोटो लिनुहोस्। आईवाटार्मार्कमा वाटरमार्क + त्यसपछि साझेदारी क्षेत्र (माथिको) मा इन्स्टाग्राम चयन गर्नुहोस् र यसले सिधै इन्टरग्राममा वाटरमार्क गरिएको फोटो लिनेछ जहाँ तपाईं फिल्टरहरू लागू गर्न सक्नुहुनेछ र इन्स्टाग्राममा अपलोड गर्नुहोस्। iWatermark + इन्स्टाग्रामको लागि गन्तव्यको तस्बिरलाई वाटरमार्क गर्नका लागि सजिलो तरिका हो।
समस्या: 'इन्स्टाग्राममा प्रतिलिपि' सेयरसिट देखा पर्दैन। हामी वाटरमार्क गरिएका फाईलहरू ती प्रकारका फाँटहरूमा निर्यात गर्दछौं यदि तपाईं एक .heic फाईल आयात गर्नुहुन्छ भने iWatermark + एक वाटरमार्क गरिएको ।heic फाइल निर्यात गर्दछ। 'इन्स्टाग्राममा प्रतिलिपि गर्नुहोस्' देखा पर्दैन जबसम्म फाइल निर्यात गरिएको छैन ।jpg।
समाधान: एक पनी jpg प्रयोग गर्नुहोस् इन्स्टाग्राममा प्रतिलिपि गर्न साझेदारीमा। यो प्रयास गर्नुहोस् र तपाईं देख्नुहुनेछ 'इन्स्टाग्राममा प्रतिलिपि गर्नुहोस्' त्यहाँ छ। हामी सोच्छौं कि इन्स्टाग्रामले शेयर पानाबाट .heic फाईलहरूको प्रयोगलाई अनुमति दिनको लागि तिनीहरूको अनुप्रयोग अपडेट गर्दछ।
फेसबुक साझा iOS मा निर्मित छ। फ्लिकर, ट्विटर, इभर्नोट, टम्बलर, बफरका लागि ती एप्स डाउनलोड गर्नुहोस् तिनीहरूलाई साझेदारी क्षेत्रमा प्रयोगको लागि देखाउनको लागि।
'शेयर एक्सटेन्सन' अन्य अनुप्रयोगहरूलाई iWatermark + मा नयाँ निर्यात विकल्पहरू प्रदान गर्न अनुमति दिन्छ
जबकि अघिल्लो 'फोटो सम्पादन एक्सटेन्सन' लाई iWatermark + प्रयोग गरेर वाटरमार्क फोटोहरूमा फोटोहरू सम्पादन गर्ने अनुप्रयोगहरूलाई अनुमति दिन्छ।
? / बारेमा / Prefs
मुख्य पृष्ठमा छुनुहुन्छ? तल दायाँपट्टि आइकनहरू तल यस नवबारमा पुग्न:
बारेमा - कम्पनी, प्रोग्रामरहरू, संस्करण जानकारी, मित्रलाई पठाउनुहोस् र यो अनुप्रयोगको मूल्या rate्कन गर्नुहोस्।
टेक समर्थन - हामीलाई सल्लाह, बगहरू र प्रश्नहरूको साथ यो म्यानुअलमा पहिले नै उत्तर नभएको कसरी सम्पर्क गर्ने।
प्राथमिकताहरू - यो उत्तम रूपमा छोडिएका छन् तिनीहरू जस्तो गरी तपाईंले तिनीहरूलाई पूर्ण रूपमा बुझ्नुहुन्न। यसको मतलब तलको क्षेत्र पढ्नु हो। यदि तपाईं तिनीहरूलाई मूल सेटिंग्समा फिर्ता परिवर्तन गर्न चाहानुहुन्छ भने शीर्ष बायाँमा पूर्वनिर्धारित बटनमा थिच्नुहोस्।
0. पूर्वनिर्धारित - सक्कली पूर्वनिर्धारित सेटिंग्समा फर्कन यो छुनुहोस्
1. रेटिना पूर्वावलोकन गुणवत्ता - iWatermark + अधिक गति को लागी प्रदर्शन को लागी कम रिजोलुशन विकल्प छविहरु को उपयोग गर्दछ। यो सेटिंग खोल्नाले स्क्रिनमा क्रिष्ट छविहरू प्रदान गर्दछ जुन यसलाई समर्थन गर्दछ तर अधिक मेमोरी लिन्छ। न त सेटिंग, बन्द वा बन्द, निर्यात गुण बदल्छ जुन सँधै उच्चतम गुण हुन्छ।
2. GPS स्थान हटाउनुहोस् - फोटो संग जोडिएको GPS स्थान डाटा हटाउँछ। जीपीएस मेटाडाटा के हो जुन धेरै अनुप्रयोगहरूमा नक्सामा तस्विरहरू राख्न अनुमति दिन्छ। यसको मतलव यो पनि हो कि यदि तपाईले एउटा फोटो साझा गर्नुभयो भने मानिसहरु त्यो जानकारी पढ्न सक्नेछन् कि तपाई कहाँ हुनुहुन्छ भनेर। यो कहिलेकाँही सुरक्षा चिन्ता हो। उदाहरणका लागि तपाईले अनलाइन साझेदारी गर्ने फोटोसँग जीपीएस मेटाडाटा छ जसले हिजो यूरोपमा तपाईलाई देखाउँदछ, यसको मतलब हो कि तपाईं आज आयोवामा तपाईको घरमा हुनुहुन्न र त्यस्तै एउटा चोरीको लागि यो उपयोगी जानकारी हुन सक्छ। यदि यो चिन्ताको विषय हो भने यस प्राथमिकतालाई यसमा सेट गर्दा iWatermark + बाट निर्यात गरिएका सबै फोटोहरूबाट सबै जीपीएस डाटा हटाउनेछ
3. कम्प्रेसन बनाम क्वालिटी सेटिंग - उच्च संख्याले उच्च गुणवत्ता र ठूलो आकार निर्यात गर्दछ। कम संख्याले कम गुणस्तर र साना फाइल आकार निर्यात गर्दछ। पूर्वनिर्धारित संख्या दुबैको सर्वश्रेष्ठ दिन्छ। iWatermark + .jpg कम्प्रेसनको लागि फोटोशप र अन्य अनुप्रयोगहरूको लागि समान उपकरणहरू / एपीआई प्रयोग गर्दछ। यदि तपाईं यसलाई परिवर्तन गर्ने निर्णय गर्नुहुन्छ भने jpg कम्प्रेसन, गुण बनाम आकार र अनलाइन अनुसन्धान गरेर समावेश ट्रेडोफ्स बुझ्नु पर्छ।
4. संकुचन - दृश्यात्मक रूपमा उच्चतम गुणस्तर कायम गर्ने क्रममा फोटोहरू संकुचनको लागि यो हाम्रो स्वामित्व कोड हो। यो राम्रोसँग काम गर्दछ तर यो एकदम ढिलो छ, सायद दुई गुणा ढिलो हुन सक्छ।
5. फाइल मिति निर्यात गरियो यो मूल फाईल को रूप मा नै पूर्वनिर्धारित द्वारा निर्यात गरिएको फाईल मिति सेट गर्दछ। यो क्रमबद्ध अर्डर कायम गर्दछ।
6. क्यामेरा एल्बम नाम निर्यात गर्नुहोस् - फोल्डर / एल्बमको नाम सेट गर्नुहोस् जुन iWatermark + क्यामेरा एल्बममा निर्यात गर्दछ। एप्पलको फोटो अनुप्रयोगमा पनि देखियो।
7. चेकर्स ब्राइटनेस - 'क्यानभास' पृष्ठमा चेकर्स पृष्ठभूमिको चमक परिवर्तन गर्नुहोस्।
8. म्याग्निफाइ G ग्लास जूम स्तर - क्यानभास पृष्ठमा म्याग्निफाइ glass गिलासका लागि जुम स्तर सेट गर्नुहोस्। म्याग्निफाइ। गिलास हेर्न छुनुहोस् र होल्ड गर्नुहोस्।
9. हस्ताक्षर स्क्यान कन्ट्रास्ट - यसले नयाँ सिर्जना गरिएको सिग्नेचर वाटरमार्कहरूको लागि पिक्सेल र colorलाई कालो वा सेतो मानिनेछको लागि पूर्वनिर्धारित मध्यस्थलाई परिवर्तन गर्दछ। पूर्वनिर्धारित पुनःसेट गर्न डिफल्टहरू माथिको बायाँपट्टि बटनमा छुनुहोस् 'Defaults' शीर्षक।
10। प्रतिक्रिया ध्वनिहरू प्ले गर्नुहोस् - घटनाहरूको जवाफमा आवाजहरू खेल्नुहोस्।
11। प्ले 'Haptics प्रतिक्रिया' - ह्याप्टिसहरू कम्पनहरू हुन् जुन एक प्रयोगकर्ता इन्टरफेस वस्तु वा साझेदारीको रूपमा कार्यक्रम सेट गर्ने साथ देखा पर्दछ। यसले भर्चुअल नियन्त्रणको भावनालाई सुदृढ पार्दछ।
12। सामान्य वाटरमार्क नामहरूको बारेमा चेतावनी दिनुहोस् - नयाँ वाटरमार्कको सिर्जनामा ​​त्यहाँ वर्णनात्मक फाइल नाम बनाउन चेतावनी छ। यो सेटिंग चेतावनी बन्द गर्दछ।
13। एप्पल ओएस रंग पिकर प्रयोग गर्नुहोस् - यसले हाम्रो (पूर्वनिर्धारित) बाट एप्पलको र पछाडि र colors्ग छनौट गर्न इन्टरफेस परिवर्तन गर्दछ।
14। अतिरिक्त परीक्षक प्रतिक्रिया - जब यो सेटिंग यसमा हुन्छ प्राविधिक विवरणहरू र तपाईंले खोल्नु भएको फोटो थप गर्दछ। नेभ बारमा म्यानुअलको शीर्षबाट टेक समर्थनको लागि हामीसँग सम्पर्क गर्नुहोस् र 'टेक सपोर्ट' मा ट्याप गर्नुहोस्। यस तरिकाले ईमेल पठाउनाले हाम्रो कठोर तर थोरै बौलाहा प्रोग्रामरलाई आईओटेरमार्क + को नयाँ र अधिक भयानक संस्करणहरू सिर्जना गर्न ios मा गाडिएको सidd्केतहरू / रहस्यहरू डिबग गर्न मद्दत गर्दछ।
आईवटरमार्कमा १२ वटा प्रमुख प्रकारका वाटरमार्कहरू, पाठ, चाप पाठ, बिटम्याप, भेक्टर, सीमा, हस्ताक्षर, क्यूआर, मेटाडाटा, स्टेगोमार्क, रिसाइज, अनुकूलन फिल्टर र निर्यात विकल्पहरू छन्। हामी टेक्स्ट वाटरमार्कबाट शुरू गर्नेछौं र यसलाई सबै सेटि displayहरू प्रदर्शन गर्न उदाहरणको रूपमा प्रयोग गर्नेछौं।
अघि बढ्नु अघि यो बुझ्नु महत्वपूर्ण छ कि प्रत्येक वाटरमार्क प्रकारको सेटिंग्स पृष्ठ छ, प्रत्येक वाटरमार्क प्रकारको आफ्नै सेटिंग्स हुन्छ र अन्यसँग समानमा सेटिं। हुन्छ। 'टेक्स्ट वाटरमार्क' को सबै भन्दा सेटिंग्स छ र त्यसैले यो एक ठाउँमा सेटिंग्स को सबै भन्दा स्पष्टीकरण हुन्छ।
पाठ वाटरमार्कहरू सिर्जना गर्न सजिलो छ। कुनै पनि आकारमा टेक्स्ट छिटो हुन्छ र उपलब्ध फन्टहरूमा निर्भर गर्दछ। iWatermark + २ 292 २ सुन्दर फन्टहरूमा पहुँच दिन्छ।
सुरु गर्नका लागि, मुख्य पृष्ठमा, सबैभन्दा धेरै बायाँ प्रतिमा छुनुहोस् र तपाईंको वाटरमार्क सिर्जना गर्न र हेर्न मद्दत गर्न पृष्ठभूमिको रूपमा फोटो छान्नुहोस्। तपाईंले वाटरमार्क सिर्जना गरेपछि तपाईं फोटोहरू वाटरमार्कमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
१. पाठलाई छुनुहोस् ... आईटमलाई वाटरमार्क प्रकारहरूको पृष्ठको शीर्षमा (तल देखाइएको छ)।
२. यसले पाठ वाटरमार्क सेटिंग्स पृष्ठमा नेतृत्व गर्दछ। यहाँ नाम र पाठ भर्नुहोस्।
The. सेटिंग्स र gra्ग गरीएको छ जब सम्म तपाईं 'एक पटक' हिट। यसले तलको सेटिंग्सलाई सक्रिय बनाउँदछ र त्यसपछि तपाईं स्केल, अस्पष्टता, इत्यादि समायोजित गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईंले 'भयो' दुई पटक हिट गर्नुभयो भने तपाईं मुख्य स्क्रिनमा फर्किनुहुनेछ जहाँ तपाईं वाटरमार्क फिर्ताको लागि सेटिंग्स आइकन चयन गर्न सक्नुहुन्छ।
यस भिडियोमा जस्तै सेटिंग्स समायोजित गर्नुहोस्।
रियलटाइम पूर्वावलोकन मार्फत सेटि settingsहरू समायोजित गर्नुहोस्।
महत्वपूर्ण: माथिको भिडियोमा देखाइएको अनुसार सेटिंग्समा सबै अन्तरक्रियात्मक छन्। यसको मतलब जब तपाई साइज स्लाइडर स्लाइड गर्नुहुन्छ दृश्यले फोटोमा स्विच गर्दछ ताकि तपाई पछाडि र अगाडि तान्न र हेर्न चाहानुहुन्छ सहि साइज। स्लाइड छुनुहोस् र पछाडि र अगाडि बढ्नुहोस् होल्ड गर्नुहोस् जब सम्म तपाईंले चाहनुभएको प्रभाव देख्नुहुन्न त्यसपछि जान दिनुहोस्। यो तपाईंलाई आकार, अस्पष्टता, इत्यादि सेट गर्न र तुरून्त फोटोमा तपाईंको समायोजनको नतीजा हेर्न अनुमति दिन हो।
माथीको स्क्रीनशटमा सेटिंग्स तल शीर्षकमा वर्णन गरिएको छ।
वाटरमार्कको लागि नाम टाइप गर्नुहोस्। माथिको दायाँ बटन 'पुन: नामाकरण' मा परिवर्तन हुनेछ। वाटरमार्कको नामकरण समाप्त गर्न पुनःनामाकरण ट्याप गर्नुहोस्। स्पष्ट, वर्णनात्मक नामहरू सबै भन्दा राम्रो हुन्छन्। यसले तपाईंलाई पछि फेला पार्न मद्दत गर्दछ। अब, यदि तपाईं नाम पुन: परिवर्तन गर्न चाहानुहुन्छ भने, माथि दायाँ बटनको 'डुप्लिकेट' मा परिवर्तन हुन्छ र यसमा ट्याप गर्नाले तपाईंलाई त्यो मूल वाटरमार्कको डुप्लिकेटमा राख्दछ।
तपाईंको पाठ सामग्री टाइप गर्नुहोस्। बहु-लाइन पाठ कुञ्जीपाटीको माथि दायाँ तल 'नयाँ रेखा' बटनमा थिच्नुहोस्। 'पign्क्तिबद्ध' भनिने नयाँ सेटिंग देखा पर्छ। प्राकृतिक, बायाँ, केन्द्र र दायाँबाट छनौट गर्नुहोस् र मुख्य स्क्रिनमा फोटोमा हेर्दा यो त्यसरी नै पigned्क्तिबद्ध हुनेछ। सबै पाठ मेट्न पाठ फिल्डको दायाँ x आइकनमा क्लिक गर्नुहोस्। थप जान्नको लागि यहाँ राख्नुहोस् ट्याग महत्वपूर्ण क्लिक गर्नुहोस्।
IWatermark मा उपलब्ध धेरै फन्टहरू मध्ये एक चयन गर्नुहोस्। पाठ र फन्ट वास्तविक फन्ट अनुहार, wysiwig मा प्रदर्शित हुन्छ (जे तपाईले देख्नुहुन्छ त्यो तपाईको के हुन्छ)।
फन्ट खोजी गर्नुहोस्।
तपाईंको फोटोमा टच गरेर र सानो आँखामा समात्दै सिधा तपाईंको वाटरमार्कमा फन्ट पूर्वावलोकन गर्नुहोस्
तपाईंले जहिले पनि प्रयोग गर्नुहुने फन्टहरू र रंगहरू द्रुत पहुँचको लागि मनपर्न सकिन्छ। तपाइँ मनपर्दो फन्टमा क्लिक गर्नुहोस् प्रतिमा ठोस निलो बनाउनको लागि हृदयमा हिट गर्नुहोस् र यसले नयाँ पानामा स्विच गर्दछ र त्यहाँ फन्ट थप्दछ। आफ्नो मनपर्ने हेर्न कुनै पनि समय हृदय ट्याप गर्नुहोस्।
फन्ट परिवर्तन गर्न पासा आइकन ट्याप गर्नुहोस् र तत्काल यो कस्तो देखिन्छ हेर्नुहोस्।
फिर्ता र अगाडि तीर आइकन ले तपाईंलाई रन्डम फन्टहरूको माध्यमबाट पछाडि र अगाडि लैजान्छ।
टिप: नामबाट खोजी गर्न शीर्षमा खोजी क्षेत्र प्रयोग गर्नुहोस् (then०० फन्टहरू थ्रु स्क्रोलि easier गर्न सजिलो) वा फन्ट प्रकारहरूका लागि "मोनो" वा "" स्क्रिप्ट "र फन्ट भाषा प्रकारहरू जस्तै" भारतीय "," रूसी "," जापानी "," कोरियाली "," थाई "र" अरबी "।
जब तपाईं फन्ट मनपर्दछ (माथिको) यो मनपर्ने फन्ट प्यानेलमा राख्छ। यसले तपाइँको औंला टिप्समा मनपर्ने फन्ट राख्न अनुमति दिँदछ। सयौं फन्टहरू मार्फत स्क्रोलि छैन।
केवल सही आकार प्राप्त गर्न स्लाइडरलाई छुनुहोस् र अगाडि तान्नुहोस्। फोटोमा वाटरमार्कको पिन्च र जुम पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ जब तपाईं वास्तविक पृष्ठमा हुनुहुन्छ।
टिप: स्लाइडरको छेउमा फिल्डमा साइज टाइप गर्दा ० देखि १ 0०% सम्म आकार दिन सक्छ। जबकि स्लाइडर मात्र ० देखि १००% बीचमा ड्र्याग गर्न अनुमति दिन्छ। दशमलवमा टाइप गर्न यो पनि सम्भव छ जस्तै exact 150..0 सही आकारका लागि।
वाटरमार्क घुमाउनको लागि स्लाइडर तान्नुहोस्। वा फिल्डमा पूर्ण (उदाहरण १ 14) वा दशमलव (उदाहरण १ 14.5..2) नम्बर टाइप गर्नुहोस्। मुख्य पृष्ठबाट वाटरमार्क घुमाउन पनि सम्भव छ। वाटरमार्कमा २ औंलाहरू राख्नुहोस् र घुमाउनको लागि मोड गर्नुहोस्।
वाटरमार्कको अस्पष्टता / पारदर्शिता सेट गर्नुहोस्। पारदर्शी बाँया र अस्पष्ट दाँया।
र water ट्याप गरेर सजिलै वाटरमार्कको रंग सेट गर्नुहोस्।
र Color्ग सेटिंग्स सम्पादन गर्नुहोस् - माथिको सबै विकल्पहरू हेर्नको लागि शीर्ष दायाँ सम्पादन सम्पादन गर्नुहोस् वा र edit सम्पादन गर्नको लागि तल आइकनमा आइकनहरू। RGB वा HSL मान ०..२0 पूर्णा .्क, वा ००..FF हेक्साडेसिमलको रूपमा। (तल)
मनपर्नेहरू - मनपर्ने पृष्ठमा जानको लागि मुटुको आइकन ट्याप गर्नुहोस्। त्यो सेलमा र color तोक्न सेलमा ट्याप गर्नुहोस्।
आई ड्रपर - क्यानभास पृष्ठमा जानको लागि आईकन ट्याप गर्नुहोस् र तपाईंको फोटोमा रंग चयन गर्न म्याग्निफाइifying गिलासको बीचमा प्रयोग गर्नुहोस्। टिप: हामी अधिक सूक्ष्म वाटरमार्क र select चयन गर्न यसलाई सिफारिश गर्दछौं। उदाहरण को लागी तपाईंको फोटो मा नीलो सागरमा सूर्य को डाईं पर्वत संग सूर्य सेटिंग हुन सक्छ। तपाईं पहाडमा गाढा दायाँ पट्टि तपाईंको वाटरमार्कको लागि प्रयोग गर्न सूर्यास्तको सुनौला रंगहरू मध्ये एउटा छनौट गर्न सक्नुहुनेछ। फोटोमा ब्राण्ड नयाँ र color्ग ल्याउन यसले हटाउँदछ जसले यसले स्थिरता र अखण्डतालाई बाधा पुर्‍याउन सक्छ। सूक्ष्म वाटरमार्कको लागि राम्रो छ। व्यक्तिलाई आँखामा धमाका गर्न आवश्यक छैन।
Radomize - आँखा ड्रॉपर को बायाँ एक पासा आइकन छ। त्यो ट्याप गर्नुहोस् र एक अनियमित रंग प्राप्त गर्नुहोस्। यो फन्ट पृष्ठमा जस्तै हो जहाँ रमडाइज आइकनले फन्टहरू बाहेक समान कार्य गर्दछ।
यहाँ ती विवरणहरूको केहि भिडियो छ।
महत्वपूर्ण: त्यहाँ माथि वर्णन गरिएको एक र color रंग पिकरहरू छन् र जो पूर्वनिर्धारित र pick्ग पिकरको रूपमा देखिन्छ। अर्कोलाई 'एक एप्पल ओएस कलर पिकर प्रयोग गर्नुहोस्' भनिने प्राथमिकताहरू परिवर्तन गरेर देख्न सकिन्छ। त्यसलाई खोल्नुहोस् र कुनै पनि वाटरमार्कमा रंग छनौटमा फिर्ता जानुहोस् र तपाईंले धेरै अनुप्रयोगहरूमा देख्नुहुने एप्पल देख्नुहुनेछ। छनौट तपाईंको हो।
कुनै पनि होइन - पाठ र color छनौट गर्न अनुमति दिँदछ
ईन्ग्रेभ र एम्बोस - वैकल्पिक पारदर्शिताका साथ प्रभावहरू। दुबै एक उत्कृष्ट र सूक्ष्म वाटरमार्क को लागी बनाउँछ।
यदि पारदर्शिता बन्द छ भने सबै भन्दा राम्रो परिणामहरू प्राप्त हुन्छन् जब पाठ र color सेतो वा हल्का रंगको हुन्छ। जब पाठ अँध्यारो वा कालो हुन्छ, यदि सानो मात्र नक्काक, एम्बोस र कुनै पनि बीचमा फरक देखिएमा।
वाटरमार्कको छायाको रंग र अस्पष्टता सेट गर्नुहोस्।
अफ, इra्गे्रेभ वा एम्बोस प्रभावहरू। केवल टेक्स्ट र आर्क पाठ वाटरमार्कको लागि उपलब्ध। उत्तम परिणामहरू प्राप्त हुन्छन् जब पाठको रंग सेतो वा हल्का रंगको हुन्छ। जब पाठ कालो वा कालो हुन्छ, fx खोल्दा वा बन्द हुँदा कुनै फरक देखिन्छ।
वाटरमार्कको वरपर वर्ग पृष्ठभूमिका लागि र and र अस्पष्टता चयन गर्नुहोस्।
यदि तपाईं सुरूवात गर्ने प्रयोगकर्ता हुनुहुन्छ भने, वाटरमार्कलाई छुनुहोस् र ड्र्याग गर्नुहोस् यसको स्थान परिवर्तन गर्न प्राय जसो केसहरूमा पर्याप्त हुन्छ तर स्थिति वा टाइलिंग सेटिंगले अधिक सटीकताका लागि अनुमति दिन्छ।
FYI: स्थिति iWatermark + मा सम्बन्धित छ। वस्तुको लागि स्थिति किनाराहरूबाट% द्वारा निर्धारित गरिन्छ। यसको मतलब त्यो हो कि जुनसुकै साइज वा फोटोको अभिमुखीकरण तपाईंले दृश्यात्मक उही परिणामहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ। वाटरमार्क आकार / स्थिति फोटो आयाम द्वारा प्रभावित छन्। ब्याचमा प्रत्येक फोटोको आकार र अभिमुखिकरणको बावजुद वाटरमार्क एकै ठाउँमा प्रत्येक तस्विरमा राखिन्छ। उदाहरण: २ फोटोको ब्याचमा, एउटा कम र अन्य उच्च रिजोलुसनमा, एक कम रिजोलुसनको तस्बिरमा करीव १० पिक्सेल चौडा हुनका लागि सीमा वाटरमार्क सेट हुन सक्छ जब उच्च रिजोलुसन फोटोमा २० पिक्सेल चौडा नाप्न सकिन्छ। यो अझै अर्को महत्त्वपूर्ण सुविधा हो जसले iWatermark + अद्वितीय बनाउँछ र पेशेवर फोटोग्राफरहरू द्वारा सराहना गरिन्छ।
वाटरमार्कको स्थिति ways तरीकाले सेट गर्न सकिन्छ:
क्यानभास पृष्ठमा वाटरमार्क ट्याप गर्नुहोस् र तान्नुहोस्।
शब्द 'स्थिति' को विपरित हाइलाइट गरिएको पाठ मार्फत छोएर। (बायाँ-तल, दायाँ-शीर्ष, आदि पाठ। तलको स्क्रीनशट हेर्नुहोस्) वा पिन आइकनमा दुई पटक छुनुहोस्।
अधिक सटीक नियन्त्रणको लागि (पिक्सेल द्वारा) तलको नजमा वाटरमार्क स्थान ट्यापमा।
त्यसपछि क्यानभास पृष्ठमा तपाईं यो देख्नुहुनेछ:
जुन तपाईं त्यसपछि सानो वेतन वृद्धिमा वटरमार्क नज गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
जब तपाईं वाटरमार्कलाई स्थानमा लैजानुहुन्छ तपाईं यसलाई पिन गर्दै हुनुहुन्छ। एक पिन गरिएको वाटरमार्कलाई बाँया, केन्द्र वा दायाँ र माथिको, केन्द्र र तल सन्दर्भित गरिन्छ। तलको स्क्रिनशटमा वाटरमार्क 'बायाँ' र 'माथि' मा छ।
पिन गरिएको कुना छान्नुहोस्। बायाँ, केन्द्र, वा दायाँ र शीर्ष, केन्द्र वा तल क्लिक गर्नुहोस्।
टिप: वाटरमार्कको स्थिति पूर्वावलोकन फोटो पृष्ठमा निलो सेतो पिन आइकनहरू द्वारा देखाईएको छ (तल हेर्नुहोस्)। तपाईंको औंलाले वाटरमार्कलाई चारै तिर सार्ने प्रयास गर्नुहोस् र पिन आइकन अन्य कुनाहरूमा सर्ने हेर्नुहोस् जब तपाईं तिनीहरूको नजिक जानुहुन्छ। स्थिति सेटिंग्समा जान पिन दुई पटक छुनुहोस्।
विशेष केसहरूको लागि हो जहाँ तपाईंले सम्पूर्ण फोटोमा एक पटक वाटरमार्क राख्न चाहानुहुन्छ मान्छेलाई काँधमा तपाईंको फोटोहरू प्रतिलिपि गर्न वा प्रयोग गर्न गाह्रो बनाउँदै। माथीको स्क्रीनशटमा प्रदर्शित स्थितिमा पहिलो स्विच पल्टाउनुहोस्। टाइलिंगका लागि हरियोमा स्विच गर्नुहोस्।
टाइलिंगका लागि सेटिंग्स धेरै स्पष्ट छन्। स्लाइडरहरू सार्नुहोस् र परिवर्तनहरू तुरून्त पूर्वावलोकन गर्नुहोस्।
आकार - कम गर्ने / आकार विस्तार गर्ने फोटोमा त्यो वाटरमार्कको बढी / थोरै प्रतिलिपिहरू प्रदर्शन गर्दछ।
ग्याप - प्रत्येक प्रतिलिपि बीचको खाली ठाउँ।
तेर्सो अफसेट - सबै प्रतिलिपिहरू दायाँ वा बायाँ सारिन्छ
ठाडो अफसेट - प्रतिलिपिलाई माथि वा तल सार्दछ।
कोण - सबै प्रतिलिपिहरूको कोण परिवर्तन गर्दछ।
अस्पष्टता - सबै प्रतिलिपिहरूको वाटरमार्कको पारदर्शिता परिवर्तन गर्दछ।
पूर्वावलोकन प्रयोग गर्दै टाइलिंगको साथ प्रयोग गर्नुहोस्। सामान्यतया टाईलिंग १ वटरमार्कको साथ गरिन्छ फोटोमा अतिरिक्त सुरक्षा थप्न प्रयोग गरिन्छ। तर, रमाईलोको लागि तपाईं विशेष प्रभावको लागि एकै साथ २ वा बढि टाईल्ड वाटरमार्कहरू खोल्न सक्नुहुन्छ।
माथिको टाईलिंगले १ पाठ वाटरमार्क प्रयोग गरिरहेको छ तर पाठ आर्कहरू, ग्राफिक्स र अन्य वाटरमार्क प्रकारहरू प्रयोग गर्न सम्भव छ। तिनीहरू माथिको माथि अझ सूक्ष्म हुन सक्छन् तर हामी मैन्युअलको लागि सानो आकारमा पनि टाइलिंग स्पष्ट पार्न चाहन्थ्यौं।
सम्मिलित गर्नुहोस् ©, ,
विशेष वर्ण घुसाउनुहोस्। कीबोर्डको शीर्षमा 'टेक्स्ट वाटरमार्क' सेटिंग्स यो हो:
पहिलो pretty राम्रा स्पष्ट ट्याप ती अक्षरहरू सम्मिलित गर्नका लागि (प्रतिलिपि अधिकार, पंजीकृत ट्रेडमार्क र ट्रेडमार्क प्रतीक)।
ट्यागहरू अविश्वसनीय रूपले उपयोगी छन्! किबोर्डको शीर्षमा 'सम्मिलित ट्याग' प्रयोग गर्नुहोस् (माथि देखिएको) मेटाडाटा राख्न (जस्तै क्यामेरा मोडेल, सिर्जना मिति, अनुक्रम संख्या, फाईल नाम, स्थान, आदि) त्यो फोटो वा भिडियोमा देखिने वाटरमार्कमा वा फोटोमा वा भिडियो त्यहाँ केहि उदाहरणहरू छन् वाटरमार्कहरू जुन अनुप्रयोगसँग आउँदछ तर तपाईं यी प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ तपाईंको आफ्नै फोटोमा देखाइएको जानकारीको विविधता प्रदर्शन गर्नका लागि तपाईंको आफ्नै अनुकूलित वाटरमार्क सिर्जना गर्न जुन त्यो फोटोमा मेटाडेटाको आधारमा फरक हुनेछ।
ट्यागहरू प्रयोग गर्न 'घुसाउनुहोस् ट्याग' बटनमा छुनुहोस् तपाईलाई यस पृष्ठमा लगिएको छ:
माथिको स्क्रिनसटमा तल 'सबै ट्यागहरू देखाउनुहोस्' पूर्वनिर्धारित रूपमा देखाउँछ। 'उपलब्ध ट्यागहरू मात्र' चयन गर्दा चयन गरिएको फोटो भित्रका ट्यागहरू मात्र देखाउनेछन्।
प्रत्येक ट्यागको ढाँचा हुन्छ, यो सँधै% सँग सुरु हुन्छ ता कि कार्यक्रमले यो पहिचान गर्न सक्दछ कि यो ट्याग हो। ट्याग मुनि चयन गरिएको फोटोमा मेटाडाटाबाट जानकारी छ। यदि कुनै फोटो चयन गरिएको छैन (क्यानभास पृष्ठमा देखिने फोटो) उदाहरण जानकारी सामान्य छ।
प्रत्येक चल जुन फोटोबाट मेटाडाटाको एक विशेष टुक्रा भण्डार गर्दछ। यहाँ तपाईं मेटाडाटा भ्यारीएबलहरू (ट्यागहरू) मध्ये कुनै एकलाई स्पर्श गर्न सक्नुहुन्छ त्यो फोटो जानकारीलाई पाठ वाटरमार्कको रूपमा राख्न। त्यो पाठको वाटरमार्क फर्म्याट गर्न सकिन्छ र ट्याग वर्णन गर्न र मद्दत गर्न अन्य पाठ थप्न।
यसलाई कार्यमा हेर्नका लागि माथिको ट्यागहरू मध्ये कुनै एकमा छुनुहोस् र त्यसपछि तपाईं जस्तो पाठ टेक्स्ट वाटरमार्क छ।
माथिको उदाहरणमा% CAM1 एक चर हो कि क्यामेरा मोडेल जानकारी हो कि प्रत्येक तस्वीर बाहिर खींचिएको छ। 'क्यामेरा:' जानकारीको लागि वर्णन / लेबल मात्र हो जुन यसलाई पछ्याउँदछ। वाटरमार्क क्यामेरा प्रिन्ट गर्न सक्ने विभिन्न क्यामेराबाट फोटोको समूहमा: पहिलोमा निकन, क्यामेरा: दोस्रोमा क्यानन र तेस्रोमा आईफोन cameras प्लस।
यस फोटोको फेदमा बेहोश वाटरमार्क हेर्नुहोस् जुन प्रयोग गरिएको क्यामेरा र अन्य जानकारी देखाउँदछ।
यो अचम्म लाग्दो छ कि water वटरमार्कहरू र ट्यागले फोटोको लागि के गर्न सक्छ
टिप: विशेष गरी उपयोगी ट्याग% WCNT हो। तस्विरको ब्याचको साथ यो प्रयोग गर्नुहोस् फोटोमा स्थिर वृद्धि गरिएको नम्बर राख्न। त्यसोभए, यदि तपाईंसँग ब्याचमा photos०० फोटोहरू छन् र तपाईंसँग यो ट्यागको साथ टेक्स्ट वाटरमार्क छ:
संख्या% WCNT 300 को
त्यसो भए प्रत्येक फोटोमा water०० को संख्या १ like को जस्तै केहि वाटरमार्क हुन्छ।
हामी लगातार ट्यागमा थपिरहेका छौं। ट्यागहरूको बारेमा अधिक जान्नको लागि टेक्स्ट वाटरमार्कमा जानुहोस् ट्याब घुसाउनुहोस् क्लिक गर्नुहोस् र प्रत्येक ट्यागमा रहेको जानकारीमा थिच्नुहोस्।
टिप: यो एक पाठ वाटरमार्क भित्र फरक फन्ट र फन्ट आकारहरू हुन सम्भव छैन यदि तपाईं त्यसो गर्न चाहनुहुन्छ भने दुई अलग पाठ वाटरमार्क बनाउनुहोस्।
आर्क पाठ वाटरमार्कले घुमाउरो मार्गमा पाठको वाटरमार्क उत्पन्न गर्दछ। तल यी सबै सेटि settingsहरू छन्, अधिक सेटि settingsहरू त्यसपछि कुनै पनि अन्य वाटरमार्क। यसलाई बुझ्ने उत्तम तरिका भनेको तिनीहरूको परीक्षण र परीक्षण गर्नु हो। योसँग अधिक सेटि hasहरू छन् त्यसपछि केवल 'पाठ' वाटरमार्क। ती अतिरिक्त सेटि belowहरू तल वर्णन गरिएका छन्।
माथिको पाठ वाटरमार्कमा नाम, पाठ र आकारको पहिलो पाठ सेटि settingsको विवरण हेर्नुहोस्।
अक्षर बीचको ठाउँ समायोजन गर्दै। कर्निंगसँग समान तर कर्निंगले २ विशेष अक्षरहरूको बिच खाली ठाउँ समायोजित गर्दछ जबकि 'स्पेसिing' ले सबै अक्षरहरूमा समान रूपमा स्पेस थप गर्दछ वा घटाउँछ।
अधिकतम तेर्सो वा ठाडो लम्बाई जो सानो छ माथि% मा त्रिज्या आकार समायोजित गर्नुहोस्।
फिट गर्न साइज
शब्दको लम्बाई र फन्ट आकारको आधारमा स्वचालित रूपमा सर्कललाई पुनःआकार दिन्छ।
पाठ फ्लिप गर्नुहोस्।
रिंगको वरिपरि पाठ घुमाउन स्लाइडर तान्नुहोस्। वा फिल्डमा पूर्ण (उदाहरण १ 14) वा दशमलव (उदाहरण १ 14.5..XNUMX) नम्बर टाइप गर्नुहोस्।
सर्कल भित्रको रंग र अस्पष्टता नियन्त्रण गर्दछ।d
बिटम्याप / लोगो
ग्राफिक वाटरमार्क लोगो, कला र हस्ताक्षरको लागि राम्रो हो। तपाईंको लोगो वा कुनै ग्राफिक प्रयोग गर्नुहोस् तर तिनीहरूलाई विशेष ग्राफिक ढाँचा हुन आवश्यक पर्दछ। पारदर्शी पृष्ठभूमिको साथ ।png भनिन्छ। नमूना हस्ताक्षर, प्रतीक र अन्य ग्राफिक्स हामी पारदर्शी पृष्ठभूमि छ र .png फाईलहरू हो। यसको मतलब यो छ कि ग्राफिक वर्ग भए पनि केवल हस्ताक्षर आफैंले देखाउँदछ र जुन हस्ताक्षर होइन पारदर्शी हुन्छ पृष्ठभूमि फोटो मार्फत देखाउनको लागि। यो गर्नको लागि फाइल ढाँचालाई पारदर्शितासँग .png भनिन्छ र यसले वाटरमार्कको पृष्ठभूमि पारदर्शी हुन अनुमति दिन्छ (ajpg ले यो पारदर्शितालाई अनुमति दिँदैन, .png प्रयोग गर्नुपर्दछ)।
तल तपाईले png इम्पोर्ट कसरी गर्ने र png फाईल कसरी बनाउने सिक्नुहुनेछ।
Q: किन फोटोमा लोगो वाटरमार्कको लागि पारदर्शिताका साथ .png प्रयोग गर्ने?
.png संग पारदर्शिता
सेतो पृष्ठभूमि या त प्रयोग गरेर भएको हो:
क) png बिना पारदर्शिता वा
A: माथिको टिकटको दुबै ग्राफिक्स वर्गाकार छन्।
हाम्रो टिकट लोगो, पारदर्शिता संग एक PNG हो। यस PNG का क्षेत्रहरू पारदर्शी छन्, त्यसैले टिकट केवल पृष्ठभूमिले घेरिएको देखिन्छ।
यो उही ग्राफिक हो तर या त jpg वा .png पारदर्शिता बिना त्यसैले सेतो बक्स पृष्ठभूमि दोस्रो स्ट्याम्प देखाउँदछ।
जाँच गर्नुहोस् सोधिने प्रश्न (तल) वा गुगल 'png' र 'पारदर्शिता' पारदर्शिताका साथ .png फाईलहरू बनाउने बारेमा बढि जान्नको लागि।
ग्राफिक / लोगो वाटरमार्क सिर्जना गर्नु भनेको पाठ वाटरमार्क सिर्जना गर्नु जस्तै हो। केवल भिन्नता भनेको हामी एक विशेष ग्राफिक आयात गर्छौं।
तपाईंको लोगो IOS मा स्थानान्तरण गर्दै
Q: म कसरी मेरो लोगो / ग्राफिक मेरो उपकरण वा वेबबाट एप्पलको फोटो अनुप्रयोगमा मेरो आईफोन / आईप्याडमा आयात गर्न सक्छु?
A: त्यहाँ फाईल आयात गर्ने धेरै तरिकाहरू छन् तर यी मध्ये एक मात्र प्रयोग गर्नुहोस्।
ईमेल (सजिलो) - ईमेल लोगो वा आफैंमा ग्राफिक। त्यसोभए तपाइँको मोबाईल उपकरणमा त्यो ईमेलमा जानुहोस् र तपाइँको यन्त्रहरू क्यामेरा एल्बममा बचत गर्न संलग्न फाइलमा क्लिक गर्नुहोस् र होल्ड गर्नुहोस्।
एप्पलको एरड्रप - यदि तपाईं यससँग परिचित हुनुहुन्छ भने एअरड्रप आईफोन / आईप्याडमा लोगो / ग्राफिक्स आयात गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। म्याकमा एअरड्रपमा जानकारी. आईफोन / आईप्याडमा एरड्रप प्रयोग गर्ने जानकारी। म्याकबाट आईओएसमा पीएनजी लोगो साझेदारी गर्न, नियन्त्रण कुञ्जी होल्ड गर्नुहोस् र लोगो फाईल ट्याप गर्नुहोस् र म्याकमा फाइन्डरमा र ड्रपडाउन मेनू देखा पर्दछ। यस मेनूमा सेयर छनौट गर्नुहोस् र अर्को ड्रपडाउन मेनूमा एयरड्रप छनौट गर्नुहोस्। जब एरड्रप एक वा दुई क्षण पछि देखा पर्दछ यसले तपाइँको आईओएस उपकरण देखाउँदछ, त्यसमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस् र यसले फाइल र अन्तमा बिप पठाउँदा प्रगति देखाउँनेछ। यदि कुनै आईओएस उपकरण देखा पर्दैन भने निश्चित गर्नुहोस् कि एयरओले तपाईंको आईओएस उपकरणको लागि चालु गरिएको छ।
आईफोन / आईप्याड वा म्याकबाट तपाईले ग्राफिक वाटरमार्कमा कुनै ग्राफिक प्रत्यक्ष पेस्ट र पेस्ट गर्न सक्नुहुनेछ।
स्क्यान सिग्नेचर वाटरमार्क (ट्रिकको प्रकारको) - हस्ताक्षर आयात गर्न वा छविमा स्क्यान गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। यदि तपाईंसँग कालो विषय छ (जस्तै हस्ताक्षर) र सफा, चम्किलो सेतो पृष्ठभूमि। यसले क्यामेरा प्रयोग गर्दछ कागजमा लोगो स्क्यान गर्न र PNG फाईल उत्पादन गर्न। मूल कलाकृति प्रयोग उच्च रिजोलुसन हुनेछ। थप जान्न यहाँ जानुहोस्.
महत्वपूर्ण: .Png / लोगो आयात गर्न आईक्लाउड सेयर एल्बम प्रयोग नगर्नुहोस्। iCloud jpg मा png फाईल परिवर्तन गर्दछ। पारदर्शिताको अभावमा अब यसको वरिपरि सेतो बक्स हुनेछ र लोगोको रूपमा काम गर्दैन। यो एप्पलको आईक्लाउड सेयर एल्बममा रिपोर्ट गरिएको बग हो।
महत्वपूर्ण: यो एक iOS उपकरणमा निर्धारण गर्न गाह्रो छ यदि फाईल .png हो वा होईन। त्यसोभए, हामीले सजिलो तरीका सिर्जना गरेका छौं। जब तपाईं बिटम्याप / लोगो वाटरमार्क सिर्जना गर्नुहुन्छ जब तपाईं 'पिक' बटन क्लिक गर्नुहुन्छ तपाईंले फोटो थम्बनेल देख्नुहुनेछ, माथि दायाँ त्यहाँ सर्कल राउन्ड इट आइकन सहित आई छ।
ट्याप गर्नुहोस् र यसले प्रत्येक थम्बनेल फाइल प्रकार, रिजोलुसन, आकार र सिर्जना / मिति / समयको साथ ओभरले गर्नेछ। धेरै सजिलो
बिटमैप / लोगो वाटरमार्क सिर्जना गर्नुहोस्
वाटरमार्क पृष्ठमा जानुहोस्, 'नयाँ वाटरमार्क सिर्जना गर्नुहोस्' छनौट गर्नुहोस् र त्यसपछि 'बिटम्याप ग्राफिक' छनौट गर्नुहोस्। अब 'बिटम्याप ग्राफिक' का लागि सेटिंग्समा त्यहाँ २ बटन छन्।
'पिक' गर्नुहोस् जसले तपाईंलाई तपाईंको क्यामेरा एल्बम वा बाट तपाईंको लोगो छान्न अनुमति दिन्छ
'टाँस्नुहोस्' जुन तपाईंलाई अर्को ठाउँमा प्रतिलिपि गरेको आईटमहरू टाँस्न अनुमति दिन्छ।
यस वाटरमार्कको लागि सेटिंग्स पृष्ठमा जानुहोस् र तपाईंको स्वादमा परिवर्तन गर्नुहोस्।
तपाईं कुनै पनि ग्राफिक वा फोटो प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ तर of 99% समय। पारदर्शितासँग .png ग्राफिक तपाईं वाटरमार्कको लागि चाहानुहुन्छ। IWatermark मा सबै उदाहरण ग्राफिक्स पारदर्शिता संग .png हो।
Q: म किन बायाँ 'छनौट' बटन (तलको स्क्रिनशट) मा चेतावनी चिन्ह आइकन प्राप्त गर्दछु?
A: नाम वा ग्राफिकको बाँयामा चेतावनी आइकनमा ट्याप गर्नुहोस् (माथिको स्क्रीनशटमा) यसले तपाईंलाई समस्या र समाधान बताउँदछ।
Q: म कसरी वाटरमार्क हुन ग्राफिक (पारदर्शी। Png प्रारूप) सिर्जना गर्ने?
A: धेरै व्यक्तिहरू तिनीहरूलाई डिजाइनरबाट लिन्छन् वा आफै सिर्जना गर्छन्। गुगलका लागि 'कसरी लोगो सिर्जना गर्ने?' वा 'पारदर्शिताका साथ मैले लोगो png कसरी सिर्जना गर्ने?'
Q: किन म मेरो लोगोको वरिपरि सेतो बक्स, वर्ग, आयत प्राप्त गर्छु?
A: यसको मतलब तपाईसँग jpg छैन png। माथिका सबै पढ्नुहोस्।
तपाईंको उपकरणमा क्यामेरा एल्बमबाट ग्राफिक चयन गर्न अनुमति दिन्छ। एक .png ढाँचा गरिएको छवि उत्तम छ किनकि यसमा पारदर्शी क्षेत्र छ। तपाइँको क्यामेरा एल्बममा सबै वस्तुहरू छान्नुहोस्। माथिको प्रश्नोत्तर हेर्नुहोस् र म कसरी मेरो लोगो आयात गर्दछु।
एक .png छवि यदि तपाईं क्लिपबोर्डमा छ भने। तपाईं अर्को अनुप्रयोगमा प्रतिलिपि गर्न सक्नुहुन्छ (जस्तै ईमेल वा फोटोहरूबाट) र यहाँ टाँस्नुहोस्।
१००% को मतलब चौडाई वा उचाई जो यी दुई मध्ये न्यूनतम हो।
टिप - ड्र्यागि 1 १ देखि १००% सम्म माथि वर्णन गरिएको अनुसार जान्छ तर तपाई १ देखि 100०० टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। सटीक आकारका लागि १० 1..300 जस्तो दशमलवमा टाइप गर्नु पनि सम्भव छ।
तेर्सो रूपमा मिरर र / वा मिरर ठाडो रूपमा। पूर्वावलोकन हेर्न छुनुहोस् र समाउनुहोस्।
ग्राफिकको सामग्रीको र Change्ग परिवर्तन गर्नुहोस्, तपाईंको लोगो जस्तो, जुनसुकै र from्गबाट ​​जुन तपाईं चाहनुहुन्छ जुन र color्गमा। यो फोटोमा रंगहरू ग्राफिक बनाउनका लागि अत्यन्त उपयोगी हुन सक्छ।
अस्पष्टता र छाया टेक्स्ट वाटरमार्कमा माथि वर्णन गरिए अनुसार काम गर्नुहोस्।
एकचोटि तपाईंले 'भयो' हिट गरी सबै अन्य नियन्त्रणहरू उपलब्ध छन् र माथिको बनाउने पाठ वाटरमार्कमा वर्णन गरियो।
भेक्टर वाटरमार्क एक छवि को गणितीय प्रतिनिधित्व मा आधारित छ। एक भेक्टरले ग्राफिकमा पोइन्ट, लाइन, कर्भ र अन्य ग्राफिक आदिमहरू प्रयोग गर्दछ। यसको मतलव बिटमैप ग्राफिकको विपरित हो जुन फरक आकारमा ब्लक देख्न सक्दछ भेक्टर सबै आकारमा उत्तम देखिन्छ।
iWatermark + सँग SVG भेक्टरहरूको विशाल बिल्ट-इन लाइब्रेरी छ। SVG भेक्टरहरूका लागि विशेष ढाँचा हो।
माथिको एक साथ SVG भेक्टर ग्राफिक (सियार), मेटाडाटा (अदृश्य) र २ पाठ वाटरमार्क (कुनै वर्षा छैन ... फक्स फोटोग्राफी) को उपयोग गर्ने उदाहरण हो।
महत्वपूर्ण: सूक्ष्म वाटरमार्कहरू प्राय: उत्तम हुन्छन्। तर यस सानो छविमा यो म्यानुअलमा सानो आकारको स्क्रिनशटहरूको लागि यसलाई दृश्यमान बनाउन उच्च कन्ट्रास्ट वाटरमार्कहरू प्रयोग गर्नु आवश्यक थियो। यस फोटोको ठूलो संस्करणमा यदि सेतोको सट्टा फक्स र लोगो फोटोमा र colors्गहरूमध्ये एक हो, हरियो वा खैरो जस्तो छ भने, त्यसोभए यो तस्बिरमा मिसाइनेछ र अझै स्पष्ट हुन्छ। कडा वा सूक्ष्म कन्ट्रास्टको साथ वाटरमार्क गर्ने निर्णय सबै तपाईंको आशयमा निर्भर गर्दछ।
अर्को उपयोगी प्रकार बोर्डर वाटरमार्क हो। यसले SVG (सबै आकारहरूमा उत्तम रेन्डडिशन) कला प्रयोग गर्दछ पूरै फोटोको वरिपरि किनारहरू र कुनामा स्क्रोलवर्क पनि। सीमा पुस्तकालयमा एक ग्राफिक चयन गर्न तल देखीएको छनौट प्रयोग गर्नुहोस्। किनाराहरूसँग विशेष सेटिंग भनिन्छ:
हिचहरूले दूरीहरू तपाईंले सेट गरेको दूरीहरूमा सिमाहरू।
तपाईं विशेष कसैलाई हाइलाइट गर्न बोर्डरहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। :)
एउटा क्यूआर कोड (यो "द्रुत प्रतिक्रिया" को लागि खडा छ) एक सेल फोन पढ्न योग्य बार कोड हो कि वेबसाइट यूआरएल को, सादा पाठ, फोन नम्बर, ईमेल ठेगानाहरू र much२ 4296 characters वर्ण सम्मका कुनै अन्य अल्फान्यूमेरिक डेटा भण्डारण गर्न सक्दछ। A QR ले एक महान वाटरमार्क बनाउन सक्छ।
तलको QR उदाहरण छविले हाम्रो वेबसाइट url, https://plumamazing.com होल्ड गर्दछ। IOS मा क्यामेरा अनुप्रयोगहरू (iOS मा) र एन्ड्रोइडमा शुद्ध क्यामेरा अनुप्रयोगले QR कोडहरूमा जानकारी स्क्यान गर्न र कार्य गर्न सक्दछ। त्यहाँ अन्य धेरै QR स्क्यानर अनुप्रयोगहरू पनि छन्। तल क्यूआर कोड स्क्यान गर्नुहोस् र तपाईं हाम्रो साइटमा स्वचालित रूपमा जान छनौट पाउनुहुनेछ। तपाइँ तपाइँको साइट को लागी एक बनाउन सक्नुहुन्छ वा कुनै पानामा तपाइँ प्रदर्शन गर्न चाहानुभएको जानकारीको साथ।
उपयोग उदाहरणहरू। QR हरू फोटो वा अन्य ग्राफिक्समा वाटरमार्कको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ जुन नाम, ईमेल, url लाई समात्न सक्ने व्यक्तिलाई तपाईंको साइटमा लैजान वा अन्य जानकारीमा तपाईंको सृजनात्मकतामा निर्भर गर्दछ।
१. कसैको तस्बिरको गुच्छाका लागि क्यूआर वाटरमार्क हुन सक्छ र प्रत्येक क्यूआरले यसको आफ्नै वेब पृष्ठमा स्थान, सर्तहरू, मूल्य निर्धारण, आदिमा जानकारीको साथ लिन सक्छ।
२. तपाईका तस्विरहरूलाई क्यूआरको साथ वॉटरमार्क गर्नुहोस् जसमा तपाईंको युआरएल, ईमेल, प्रतिलिपि अधिकार र अन्य जानकारी समावेश गर्दछ। फेसबुक, ट्विटर र अन्य सामाजिक मिडिया को लागी एक तस्वीर संग तपाईंको सम्बन्ध कायम गर्न को लागी राम्रो छ। जब तपाइँ एक सामाजिक मिडिया साइटहरु मा एक तस्वीर अपलोड वे अक्सर मेटाडाटा हटाउँछ। सामाजिक साइटहरूले दृश्य, वाटरमार्कहरू जस्तै पाठ, हस्ताक्षर, ग्राफिक्स वा QRs हटाउँदैन।
V. Vimeo, YouTube, आदि वा तपाइँको साइट को लागी एक निर्देशात्मक भिडियो बनाउनुहोस्। तपाइँको भिडियोको सीधा लिंक QR मा राख्नुहोस्। स्टिकरहरू प्रिन्टिंगका लागि केही कागजहरू लिनुहोस् र यी QR कोडहरूको गुच्छा प्रिन्ट गर्नुहोस्। अब यस QR कोडलाई म्यानुअलमा थप्पड गर्नुहोस्। जब प्रयोगकर्तालाई अधिक दृश्य मद्दत चाहिन्छ तिनीहरूले QR स्क्यान गर्न सक्दछ भिडियोमा सिधा जानका लागि।
QR-Code वाटरमार्क सिर्जना गर्नुहोस्!
'नयाँ वाटरमार्क' पृष्ठबाट 'QR-Code…' चयन गर्नुहोस्। यसलाई नाम दिनुहोस् र तपाईंको स्वादमा समायोजन गर्नुहोस्। दिमागमा राख्नुहोस् यदि तपाईंले आकार र अस्पष्टता कम गर्नुभयो भने स्क्यानरलाई सबै जानकारी पढ्न गाह्रो हुन सक्छ। अधिक जानकारीको लागि वेबमा QR बारे अधिक प्रयोग र पढ्नुहोस्।
टिप: क्यूआर कोड र पढ्नयोग्यताको बारेमा थप जानकारीको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
हस्ताक्षर (ल्याटिनबाट: हस्ताक्षर, "हस्ताक्षर गर्न") हस्तलेखन हो (र प्रायः शैलीकृत) कसैको नामको चित्रण जुन कुनै व्यक्तिले कागजातमा परिचय र आशयको प्रमाणको रूपमा लेख्दछ। एक हस्ताक्षर कार्य सिर्जनाकर्ता प्रतीकात्मक छ। धेरै प्रख्यात कलाकारहरू (क्लाउड मोनेट, अल्ब्रेक्ट ड्युरेर, हेनरी डि टुलूस-लौट्रेक, साल्भाडोर डाले, जोहान्स भर्मिर, वासिली कन्डिन्स्की, जोन मिरी, हेन्री मॅटिस, हेनरी रुस्यू, म्याक्सफिल्ड पेरिश र अन्य धेरै) ले उनीहरूको काममा हस्ताक्षर गरे। कसैलाई नभन्न अरूलाई भन्न दिनुहोस्, हस्ताक्षरले क्लासिक वाटरमार्क बनाउन सक्छ।
एक 'हस्ताक्षर वाटरमार्क' 'हस्ताक्षर स्क्यान' वा ग्राफिक्स (एक पारदर्शी। Png फाईल) द्वारा सिर्जना गर्न सकिन्छ जुन तपाईं इनपुट गर्नुहुन्छ। उच्च कन्ट्रास्टको साथ ग्राफिक्स जस्तै हस्ताक्षर जहाँ कलमबाट मसीले कालो वा कम से कम गाढा र सेतो पृष्ठभूमिले राम्रोसँग काम गर्दछ।
हस्ताक्षर वाटरमार्क सिर्जना गर्नुहोस्!
Ways तरीकाले तपाइँको हस्ताक्षर इनपुट गर्न र यसलाई एक वटरमार्कको रूपमा प्रयोग गर्नुहोस्।
छाँटिएको उज्ज्वल सेतो कागजको पाना, गाढा मसी कलम वा शार्पी लिनुहोस् र केन्द्रमा तपाईंको हस्ताक्षर लेख्नुहोस्। यस पानालाई समानता बिना छायाको साथ प्रकाशित गर्नुहोस्।
'नयाँ वाटरमार्क' पृष्ठबाट यस पृष्ठ हेर्न 'हस्ताक्षर स्क्यान' क्लिक गर्नुहोस्।
'स्क्यान सिग्नेचर' बटन क्लिक गर्नुहोस्, यसले तपाईंलाई क्यामेरामा लैजान्छ जहाँ तपाईं आफ्नो हस्ताक्षरको स्क्यान / फोटो लिन सक्नुहुनेछ। यसले यसको ह्या hang प्राप्त गर्न केहि प्रयास लिन सक्दछ।
कन्ट्रास्ट स्क्यान गर्नुहोस् - एक जेदी गुरु हुनुहोस् ब्रह्माण्डमा प्रकाश र अन्धकारको शक्तिहरू समायोजित गर्नुहोस्। तपाईको हस्ताक्षर प्राप्त गर्नका लागि र कागजमा छाया वा झुर्रीहरू हटाउनका लागि यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सेटिंग हो। सेतो हटाइनेछ र केवल गाढा मसी स b्केत बिट्स रहनेछ। png फाईलमा यसले तपाईंको हस्ताक्षर बनाउँदछ।
फोटो एल्बमबाट तपाईंको हस्ताक्षर प्राप्त गर्नुहोस्। तपाईंसँग अर्को स्क्यानरमा स्क्यान गरिएको हुन सक्छ वा केहि अन्य साधनहरू जुन तपाईं आफ्नो फोटो एल्बममा आयात गर्न सक्नुहुनेछ र त्यसपछि जानकारी iWatermark +।
तपाईंको औंलाको प्रयोग गरेर तपाईंको हस्ताक्षरमा हस्तलेखन गर्न माथिको 'ड्र' बटन क्लिक गर्नुहोस्। एक सेकेन्डको अंशको लागि "चेकर्ड सिग्नेचर क्यानभास" थिच्नुहोस् र समाउनुहोस्, जबसम्म क्यानभासले यसको वरिपरि निलो रूपरेखा देखाउँदैन, तब मात्र आफ्नो औंलाले वा एप्पलको पेन्सिलले हस्ताक्षर सुरु गर्नुहोस्।
सबै अन्य सेटिंग्स माथिको 'पाठ वाटरमार्क' मा वर्णन गरिएको छ।
अब तपाईं सजिलैसँग स्मार्टफोन फोटोहरू र अन्य कला छविहरू उनीहरूलाई फेसबुक, ट्विटर र इन्स्टाग्राम, आदिमा साझेदारी गर्नु अघि साइन इन गर्न सक्नुहुनेछ।
भविष्यमा दर्शकहरूलाई सचेत गराउने एउटा राम्रो तरिका एक फोटोमा सूक्ष्म हस्ताक्षर राख्नु हो जुन तपाईंले यसलाई सिर्जना गर्नुभयो र यसरी तपाईंको फोटोमा जडान कायम राख्नुहोस् विशेष गरी यदि यो भाइरल भयो भने।
महत्वपूर्ण: प्रति फोटो १ मेटाडाटा watemark को सीमा।
त्यहाँ एक डिजिटल फोटो छवि फाइल भित्र आँखा पूरा भन्दा बढी छ। फोटो फाइलहरूले छवि डेटा मात्र भण्डार गर्न सक्दछ छविहरूको बारेमा जानकारी र यसलाई 'मेटाडाटा' भनिन्छ। फोटो फाईलहरू टेक्निस, वर्णनात्मक र प्रशासकीय वर्गहरू समावेश गर्न सक्दछन् जुन धेरै प्रकारको मेटाडाटाको नामका साथ EXIF, TIFF, IPTC, इत्यादि जस्ता तपाईं अधिक जानकारीको लागि Google हेर्न सक्नुहुनेछ। महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो कि iWatermark + ले वाटरमार्क प्रकारको रूपमा मेटाडाटा समर्थन गर्दछ। यसको मतलव तपाईं वाटरमार्क सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ जसले तपाईंको नाम, शीर्षक, प्रतिलिपि अधिकार, इत्यादि फोटो फाईल भित्र मेटाडाटाको रूपमा थप गर्दछ। यो सुरक्षाको अर्को लेयर र मान्य छ कि तस्बिर तपाईंको हो।
आईवटरमार्कमा तपाईं मेटाडाटाको साथ important महत्त्वपूर्ण कार्यहरू गर्न सक्नुहुन्छ:
१. वाटरमार्कको साथ फोटोमा अदृश्य मेटाडेटा थप्नुहोस्।
२. दृश्यमान वाटरमार्क थप्नुहोस् जुन तपाईंको फोटोमा छापिएको मेटाडेटाको छनौट प्रदर्शन गर्दछ।
A. फोटोको मेटाडाटा हेर्नुहोस्।
मेटाडाटा वाटरमार्क सिर्जना गर्नुहोस्!
१. 'नयाँ वाटरमार्क' पृष्ठबाट सुरू गरीएको अदृश्य मेटाडाटा वाटरमार्क थप्नको लागि 'मेटाडाटा…' चयन गर्नुहोस् र तपाईं यो पृष्ठ देख्नुहुनेछ:
यहाँ तपाईं फोटोको सिर्जनाकर्ता थप्न सक्नुहुनेछ र यसको प्रतिलिपि अधिकार कसको हो। भविष्यमा त्यो फोटो फेला पार्न मद्दतको लागि कुञ्जी शब्दहरू प्रविष्ट गर्नुहोस् यदि तपाईं लाइटरूम वा पिकासा प्रयोग गर्नुहुन्छ भने। कमेन्ट फ़ील्ड तपाईले थप्न चाहानु भएको जस्तो लागी हो।
महत्वपूर्ण: प्रति फोटो मात्र १ StegoMark लाई अनुमति छ।
StegoMark पहिलो पटक फोटोग्राफी को लागी एक स्टेगनोग्राफिक वाटरमार्क को कार्यान्वयन हो र मात्र iWatermark मा उपलब्ध छ। स्टेगनोग्राफीले वास्तविक डाटा छवि डेटामा अदृश्य रूपमा केही डाटा सम्मिलितको कुनै पनि प्रक्रियालाई बुझाउँदछ।
StegoMark किनकि यसले स्ट्यागनोग्राफीलाई जोड्दछ, अक्सर भनिन्छ स्टिगो छोटो र मार्क वाटरमार्क शब्दबाट। StegoMarks एक विशेष एल्गोरिथ्म प्लम आश्चर्यजनक मा डिजाइन प्रयोग गर्दछ। यो विशेष ईनकोडि thatको डाटा iWatermark बिना व्याख्या गर्न असम्भव बनाउँछ। यदि त्यहाँ पासवर्ड छैन भने iWatermark को कुनै पनि प्रतिलिपिले लुकेको पाठ प्रकट गर्न सक्दछ। यदि त्यहाँ पासवर्ड छ भने पासवर्ड र iWatermark भएको व्यक्तिले मात्र लुकेको पाठ प्रकट गर्न सक्दछ।
एक तरीकाको स्टिगोमार्क तपाईंको ईमेल वा व्यवसाय युआरएल फोटोमा इम्बेड गर्नु हो। यो सँग एक मेटाडाटा र एक दृश्य वाटरमार्क तपाइँको पत्यारपत्र मा एक तस्वीर संग जोडिएको संरक्षण को विभिन्न परतहरु दिन्छ। प्रत्येक छुट्टै वाटरमार्क लेयर विभिन्न तरीकाले चीजहरूको प्रतिकार गर्दछ जुन फोटोमा गर्न सकिन्छ जस्तै काँटछाँट, पुन: नामकरण, पुन: नामाकरण, इत्यादि। तपाईंको स्वामित्व जानकारी कायम राख्न।
एक स्टिगोमार्क सिर्जना गर्नुहोस्
सुरू गर्न 'नयाँ वाटरमार्क' पृष्ठमा जानुहोस् र 'स्टेगोमार्क ...' चयन गर्नुहोस् र तपाईं यो पृष्ठ देख्नुहुनेछ:
'नाम' को लागि यस स्टेगोमार्कको लागि राम्रो वर्णनात्मक नाम राख्नुहोस्
'लुकेको सन्देश' मा पाठ छविमा इम्बेड गर्न चाहानुहुन्छ।
IWatermark + को साथ कुनै पनि पासवर्डको उपयोगले सन्देश पढ्न सक्नुहुन्न तर अरू कोही होईन।
अधिक गोपनीयताका लागि पासवर्ड प्रविष्ट गर्नुहोस् जसको अर्थ पासवर्ड र iWatermark + को साथ मात्र कसैले त्यो पाठ सन्देश पढ्न सक्दछ।
एक चोटि यो काम सकिसकेपछि, StegoMark'ed फोटो निर्यात गर्नुहोस्। तपाइँको लुकेको जानकारी कसरी हेर्ने भनेर हेर्नको लागि अर्को सेक्सन 'एक स्टेगोमार्क पढ्दै' हेर्नुहोस्।
एक स्टिगोमार्क पढ्दै
एक स्टेगोमार्क पढ्नको लागि पहिलोमा iWatermark + मा 'फोटो खोल्नुहोस्' बटनबाट निर्यात गरिएको StegoMark वाटरमार्क फोटो खोल्नुहोस्।
त्यसपछि आईभीमा जानुहोस् यसको वरिपरि सर्कलमा यसको वरिपरि आइएभी बारमा आइकन।
यस ट्यापमा जानकारी हेर्नको लागि त्यसमा ट्याप गर्नुहोस्, तल 'हाइलाइट गरिएको' स्टेगोमार्क ट्याब क्लिक गर्नुहोस्। पासवर्ड प्रविष्ट गर्नुहोस् यदि तपाईंसँग एक छ र लुकेको सन्देश सहीमा बाकसमा देखा पर्न डिटेन्ट बटनमा थिच्नुहोस्।
महत्वपूर्ण: प्रति फोटो १ स्टीगोमार्क।
२ characters क्यारेक्टर वा कम (सिफारिस गरिएको) स्टिगोमार्कले पानीको मार्क गरिएको .JPG फोटो पुन: रिसाइज गर्ने / पुन: संकुचित गर्दा यसलाई सबैभन्दा लचिलो बनाउन अनुमति दिन्छ। To० सम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ तर यसले सन्देशको लचिलोपनालाई असर गर्दछ। याद गर्नुहोस् कि तपाइँ URL छोटो पार्न यूआरएल छोटो बनाउन को लागी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
स्टिगोमार्क पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
महत्वपूर्ण: जब एक रिसाइज वाटरमार्क सक्रिय हुन्छ, तपाईलाई रिसाइज सञ्चालनमा छ भनेर सम्झाउन एक फोटोको वरिपरि "ड्यास गरिएको रूपरेखा" हरियो (सामान्य रूपमा निलो छैन) मा प्रदर्शित हुन्छ। एक पटकमा केवल १ रिसाइज वाटरमार्कलाई मात्र अनुमति छ। यदि तपाईंले नयाँ चयन गर्नुभयो भने पुरानो बन्द छ।
हामी वाटरमार्कलाई रिसाइज गर्ने विचार गर्दछौं किनकि तपाईंले फोटोलाई अनुकूलित गर्न सबै कुराले यसलाई तपाईंको आफ्नै बनाउँदछ। तपाइँको कलात्मक छनौटहरूले तपाइँको पहिचानको साथ तस्विर बिचार गर्दछ। इन्स्टाग्राम फोटोहरू पहिलो हुने वर्ग होइनन् तर इन्स्टाग्रामले धेरै प्रभावकारी रूपमा वर्ग फोटो र भिडियोहरू उनीहरूको शैली बनाउँदछ। यो भविष्यमा हुनसक्दछ, अन्य आकार र आकारहरू अन्य कलाकारहरूले प्रसिद्ध बनाउनेछन्।
वाटरमार्कको रूपमा आकारले इन्स्टाग्रामरहरूलाई तत्काल चेकमार्क गर्न र 'इन्स्टाग्राम' आकार इन्स्टाग्राम र अन्य सामाजिक नेटवर्कहरूमा आउटपुट गर्न अनुमति दिन्छ। यसैले धेरैले लाग्छ कि iWatermark + इन्स्टाग्रामका लागि एक आवश्यक अनुप्रयोग हो।
तल एउटा फोटो छ जुन स्क्रिनशटको श्रृंखलामा परिवर्तन भएको छ, प्रत्येक स्क्रिनशटको साथ पुनःआकार सेटिंग्स देखाउँदछ जुन त्यो फोटोको लागि हो।
मूल छवि रिसाइज गरिएको छैन
हामीले एस्पेक्ट फिट र एस्पेक्ट भर्यौं पहिले इन्टरफेसमा अलग-अलग आईटमहरू जूम भन्ने वस्तुमा। जुम सहित अब सबै नियन्त्रणहरूले तपाईंलाई आउटपुटमा हेर्न चाहानुभएकोको लागि 'भावना' प्राप्त गर्न प्रत्यक्ष पूर्वावलोकन प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ।
तान्नुहोस् जब जुम नियन्त्रण ताल्चा लगाउँछ र ०% जूममा एस्पेक्ट फिट र १०० जूममा एस्पेक्ट फिल भर्दछ। यो सरल बनाउनको लागि गरिएको थियो।
वाटरमार्क एको अर्को तरिका सम्पूर्ण फोटोलाई शैली दिनुहोस्। अनुकूलित फिल्टरहरू MANY विकल्पहरूको साथ धेरै फिल्टरहरूमा जान्छ। दुर्भाग्यवस हामी ती सबैलाई यहाँ वर्णन गर्न सक्दैनौं। हामी 'Pixelate' जस्तै एक फिल्टरको साथ प्रयोग (वरिपरि खेल्ने) सिफारिस गर्दछौं तिनीहरूले कसरी काम गर्दछन् भन्ने महसुस गर्न। एक पटक तपाईंसँग एक विशेष सेटिंग्सको साथ फिल्टर छ जुन तपाईंलाई यो वर्णनात्मक नामको साथ वाटरमार्कको रूपमा बचत गर्नुहोस् ताकि तपाईं भविष्यमा फेला पार्न र प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईंले कलाकारहरूको लागि फिल्टरहरू नाम दिन सक्नुहुन्छ जुन उनीहरूलाई प्रेरणा दिन्छ। एउटा 'भ्यान गोग' फिल्टरले र colorsहरूलाई थप जीवन्त बनाउन र घुमाउरो थप्न सक्दछ। A 'Ansel Adams' फिल्टर एक फोटो कालो र सेतो बनाउन, कन्ट्रास्ट वृद्धि र तीखोपन जोडी हुन सक्छ। एप्प्ट नामहरूले तपाइँलाई फेला पार्ने र सेव गर्ने सेटि .हरूको संयोजनमा फर्केर मद्दत गर्दछ।
आईवटरमार्कमा फिल्टरहरू कोर छविमा आधारित हुन्छन् एप्पलद्वारा निर्मित टेक्नोलोजी। यस लि्क दुबै प्राविधिक विवरण, सेटि ofको विवरण र फोटोहरूले उत्पादन गर्न सक्छन् परिवर्तन गर्दछ। निश्चित सन्दर्भको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
यो वाटरमार्क थपिएको छ जब तपाईं इनपुट मिडियाबाट ढाँचा परिवर्तन गर्न चाहानुहुन्छ। उदाहरण को लागी इनपुट फोटो .heic ढाँचा मा छ र तपाई यसलाई .jpg मा आउटपुट गर्न चाहानुहुन्छ वा तपाईंसँग .Mov भिडियो छ र तपाईं .mp4 को रूपमा वाटरमार्क गरिएको भिडियो निर्यात गर्न चाहानुहुन्छ।
प्रायः व्यक्तिहरू। एक 'निर्यात विकल्पहरू' बिना वाटरमार्क आईवटरमार्क + सँधै इनपुट फाइल ढाँचाबाट स्वचालित रूपमा स्वचालित रूपमा स्वचालित रूपमा आउटपुटमा निर्यात गर्दछ। इनपुट प्रारूप निर्गत स्वरूप। अब, यो वाटरमार्कको साथ तपाईं आउटपुट ढाँचा विभिन्न ढाँचामा परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ।
प्रयोग गर्नका लागि, पहिले यसलाई नाम दिनुहोस् अन्यथा तपाईं पहेलो चेतावनी चिन्ह जस्तो माथि स्क्रिनशटमा देख्नुहुनेछ। तपाईं दिन सक्नुहुनेछ वर्णनात्मक नाम जस्तै 'PNG मा फोटो निर्यात वा MP4 मा भिडियो निर्यात गर्नुहोस्'। यदि तपाईं यो फोटोको लागि प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ भने निर्यात गरिएको फाईल स्वरूप चयन गर्नुहोस्। माथिको 'फोटो फाइल ढाँचा' पछि अर्को पछाडि तीरहरू पछाडि ट्याप गर्नुहोस्। अब जब तपाईले फोटोको आउटपुट ढाँचा .png बनाउन चाहानुहुन्छ भने अरूले तपाईले प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ भन्दा यो वॉटरमार्क चयन गर्नुहोस्।
GPS स्थान मेटाडाटा हटाउनुहोस् - कुनै जीपीएस डाटा वाटरमार्क गरिएको फोटोमा हुनेछैन
सबै मेटाडाटा हटाउनुहोस् - सबै EXIF, IPTC, GPS र अन्य मेटाडाटा हटाउँछ।
परिमार्जित मिति राख्नुहोस् - जब यसले मूल फोटोमा उस्तै परिमार्जित मिति राख्दछ। जब यो बन्द हुन्छ वर्तमान मितिमा परिमार्जित मिति परिवर्तन हुन्छ।
सिर्जना गरिएको मिति राख्नुहोस् - जब यसले मूल फोटोमा उस्तै सिर्जना गरिएको मिति राख्छ। बन्द हुँदा यो सिर्जना गरिएको मितिलाई वर्तमान मितिमा परिवर्तन गर्दछ।
माथीको स्क्रीनशटमा सेटिंग्स सामान्य तरीकाले जुन धेरै व्यक्तिले सेट गर्छन्।
ढाँचा विकल्पहरू निर्यात गर्नुहोस्:
फोटोहरू - पूर्वनिर्धारित (मूल) *, HEIC, JPEG, PNG, र GIF।
भिडियो - पूर्वनिर्धारित (मूल) *, MOV, M4V र MP4।
* पूर्वनिर्धारित (मूल) को अर्थ इनपुट ढाँचामा केहि पनि पूर्वनिर्धारित निर्यात गर्नुहोस्। यो कसरी बनेको iWatermark + ले काम गरे पछि। तपाईंसँग 'निर्यात विकल्पहरू' प्रयोग गर्नु आवश्यक पर्दैन वाटरमार्क गरिएको फोटो मूल स्वरूपको जस्तै ढाँचा हुन।
पहिले,2वा बढी फोटोहरूको ब्याच चयन गर्न, बटन 'S ट्याप गर्नुहोस्तल फोटोहरू (जानकारी सहित)' चयन गर्नुहोस् र आफ्नो फोटोहरू चयन गर्नुहोस्।
यदि तपाईंलाई आवश्यक छ भने, म्यानुअलमा आयात मिडिया क्षेत्र बारे पढ्न यहाँ ट्याप गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईंले प्रयोग गर्न चाहनुभएको वाटरमार्क(हरू) चयन गर्नुहोस् त्यसपछि दायाँ तलको न्याभि बारमा रहेको 'शेयर' आइकनमा ट्याप गरेर निर्यात सुरु गर्नुहोस्। 'सेभ छवि' ट्याप गर्नुहोस् जसले ती सबै वाटरमार्क गरिएका तस्बिरहरूलाई Apple Photos क्यामेरा एल्बममा राख्छ। ब्याच प्रशोधन फेसबुक, ट्विटर, आदि जस्ता सोशल मिडियामा प्रत्यक्ष निर्यातमा गर्न सकिँदैन। पहिलो फोटो वाटरमार्क गरिसकेपछि तपाईंले यो संवाद (तल) पाउनुहुनेछ।
टिप: बहु छविहरू चयन गर्नका लागि 'फोटोहरू चयन गर्नुहोस् (जानकारीको साथ') प्रयोग गर्नुहोस्: ट्याप र छवि त्यसपछि अन्तिम फोटोमा जानुहोस् र डबल ट्याप गरिएको पहिलो एकलबाट सबै फोटोहरू चयन गर्न डबल ट्याप गर्नुहोस्।
"ब्याच प्रक्रिया सबै" को चयनले iWatermark + लाई लिन, वाटरमार्क लिन र प्रयोगकर्ताको हस्तक्षेप बिना सबै फोटोहरू निर्यात गर्न अनुमति दिन्छ।
महत्वपूर्ण: एप्पल एपीआई सीमितता को कारण, ब्याच प्रोसेसिंग, हस्तक्षेप बिना, केवल एप्पलको क्यामेरा रोलमा सम्भव छ। फेसबुक, ट्विटर, ड्रपबक्स, इत्यादिमा बहु तस्वीरहरू निर्यात गर्न क्रमबद्ध रूपमा मात्र गर्न सकिन्छ, एक एक गरेर।
iWatermark+ Apple Photos मा सम्पादन विस्तारको रूपमा काम गर्दछ।
Apple Photos मा प्रयोग गर्न
फोटोमा एप्पल फोटो एप खोल्नुहोस्।
तस्बिरको शीर्ष दायाँमा, 'सम्पादन गर्नुहोस्' (तलको स्क्रिनसट) ट्याप गर्नुहोस्।
अर्को पृष्ठमा शीर्ष दायाँमा3डट आइकन छ। ट्याप गर्नुहोस् (तलको स्क्रिनसट)।
एउटा पृष्ठ माथि स्लाइड हुन्छ र यस्तो देखिन्छ। iWatermark+ मा ट्याप गर्नुहोस्। यदि तपाईंले यो देख्नुभएन भने थप वस्तुमा ट्याप गर्नुहोस् र त्यहाँ फोटोहरू सम्पादन गर्ने iWatermark वा अन्य एपहरू फेला पार्नुहोस्।